တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော် ~ လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်
Tuesday, December 22, 2009 0000 No comments
၁၉၄၇ ခု၊ ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော် အစည်းအဝေးကို စတင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့ ကျင်းပသော လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် လွတ်လပ်သည့် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံ ရေးဆွဲရေး လမ်းညွှန် ပြဌာန်းချက်များကို အဆိုတင်သွင်း ဆွေးနွေးလေသည်။ ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်နေ့ မြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပသော ပြည်သူ့ အစည်းအဝေးကြီးတွင် လက်ရှိ တည်ရှိသော တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော် ၏ ပုံသဏ္ဍန်နှင့် လွတ်လပ်ရေးကို တနှစ် အတွင်း ရစေရန် အာမခံကြောင်း၊ လွတ်လပ်ရေး ရလျှင် လွတ်လပ်ရေးနှင့် ထိုက်တန် အောင် အလုပ်ကြိုးစား လုပ်ကြစေလိုကြောင်း ..... စသည်များကို ရှင်းလင်းပြောကြား သွား၏ ။ဤ ပြောကြားသော မိန့်ခွန်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ နောက်ဆုံး မိန့်ခွန်းပင် ဖြစ်သည်။ ဤ မိန့်ခွန်းပြောပြီး ဇူလိုင် ၁၉ ရက်နေ့တွင် လုပ်ကြံခံရ၍ ကျဆုံးခဲ့ရသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောကြားခဲ့သော နောက်ဆုံးမိန့်ခွန်း အပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်သည်။
မူလတုန်းက အလုပ်ခိုင်းတုန်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်အမတ် တွေက ကိုယ့်နယ်ဆိုင်ရာ နယ်က ပရိတ်သတ်ကို တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်က ဘာတွေ လုပ်နေတယ် ဆိုတာ အစီရင်ခံဖို့ အလုပ် ခိုင်းတာပါဘဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုလို့ရှိယင် အခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ လွှတ်တော် အမတ်တွေရယ်လို့ တိုင်းပြည်က တင်မြှောက်လိုက် တဲ့ အခါမှာ အဲဒီလွှတ်တော် အမတ်တွေက လွှတ်တော် အစည်းအဝေး မှရှိတဲ့ အခါမျိုးမှာ မိမိတို့ အားလပ်ချိန် ရသမျှ အချိန်အတောအတွင်းမှာ မိမိတို့ကို ရွေးကောက်တင်မြှောက် လိုက်တဲ့ နယ်ကို ပြန်သွားပြီးတော့ ဒီလွှတ်တော်မှာ ဘာဖြစ်နေတယ် ဘာလုပ်နေတယ် ဆိုတာ အစရှိတဲ့ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို ကိုယ့်နယ်ကို ပြန်ပြီး အစီရင်ခံတဲ့ ထုံးစံ ရှိပါ တယ်။
အဲဒီ ထုံးစံမျိုးအတိုင်း ဗမာပြည်မှာလဲဘဲ ဒီထုံးစံ ဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက် ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အဖွဲ့ချုပ်ကို ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်အမတ်တွေက မိမိတို့ကို တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ နယ်အသီးသီးကို ပြန်ပြီး အစ်ီရင်ခံတဲ့ အစည်းအဝေးပွဲတွေ လုပ်ဖို့ ပြောလိုက်တဲ့ အခါမှာ ဒီတိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်အမတ်တွေက နေပြီး ကိုယ့်နယ် ဆိုင်ရာတွေကို ပြန်အစီရင်ခံဖို့ အဓိပ္ပါယ် မပါတေ့ာဘဲ နိုင်ငံရေး ရှင်းတမ်း တရားပွဲဆ်ိုပြီး ရပ်ကွက်တွေမှာ လုပ်လာတယ်။ အခုလိုဘဲ ယနေ့ တမြို့လုံးအတွက် နိုင်ငံရေး ရှင်းတမ်း ဆိုပြီး တော့ကာ နိုင်ငံရေး ရှင်းတမ်းပွဲများ ဖြစ်လာကြတယ်။ သို့သော်လဲဘဲ ကျွန်တော်တို့ က နဂိုပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်းဘဲ ယနေ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး ရှင်းတမ်းက ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဥက္ကဌအနေဖြင့်သာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဒီရန်ကုန်မြို့နယ် တနယ်ကနေပြီးတော့ တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်ထဲမှာ အမတ် အနေနဲ့ ၊ဒီတိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်ထဲမှာ ဘာတွေ လုပ်နေလို့ ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ် ဆိုတာတွေကို နယ်သူ နယ်သားတွေ ပြန်သိအောင် အစီရင်ခံဖို့ ရည်ရွယ်ချက်က အဓိက ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်နဲ့ ထားပြီးတော့ကာ ကျွန်တော် အခုစကား ပြောဆိုပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော် ဆိုတာကလဲ ရှေးတုန်းက ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ ရှိတဲ့ လူတွေဟာ အနည်းကျဉ်း ကြးဘူးပေမယ့် ဒီတခါမှဘဲ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော် ဆိုိုတာ ကို တိုင်းပြည်က လူတွေက ရွေးကောင် တင်မြှောက်ရပြီးတဲ့နောက် အဲဒီ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်ဆိုတာကိုလဲဘဲ အကောင်အထည် သဘောမျိုးနဲ့ ပြင်ရတဲ့ အခြေအနေမျိုး ဒီတခါမှလဲ ရောက်လာကြတယ်။ အမှန်စင်စစ်မှာ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော် ဆိုပြီးတော့ တတိုင်းတပြည်လုံးမယ် တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲတွေ လုပ်ခဲ့ပေမယ့် ကျွန်တော်ထင်တာ ပြောရမယ် ဆိုယင်တော့ တိုင်းပြည်မှာ ရှိတဲ့ လူအများဟာ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်ဆိုတာကို ရှေးတုန်းက လုပ်နေကျ ဥပဒေပြု လွှတ်တော် လိုဘဲ လို့ ထင်နေကြတဲ့ လူတွေ အမြောက်အများ ရှိကြဦးမှာဘဲ။
အဲဒီလိုဘဲ အခုတော့ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်ရဲ့ အကြောင်းကို အစီရင်ခံရမယ်ဆိုယင် ပဌမရှေးဦးစွာ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်ဟာ ဘာတွေ ဆိုတာက နေပြီးတော့ သေသေ ချာချာ ကျကျနန ကျွန်တော် ရှင်းလင်းပြောပြလိုပါတယ်။ ယခု ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်ဟာ ဘယ်နေ့က စပြီးတော့ ထင်ထင် ရှားရှား ပေါ်လာသလဲ လို့ဆိုယင် အမတ်တွေ စုံစုံညီညီ ဒ်ီရန်ကုန်မြို့မှာ စုဝေးကြပြီးနောက် ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့မှာ စတင်ကျင်းပတဲ့ နေ့ကစပြီးတော့မှသာလျှင် တိုင်ပြုပြည်ပြု လွှတ်တော် ဆိုတာ ဖြစ်လာ ပါတယ်။ အဲဒီ အရင်တုန်းက ရွေးကောက်ပွဲ ပေးပင်ပေးငြားပေမဲ့ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်လို အဖွဲ့ကို မဖွဲ့စည်းနိုင်သေးပါဘူး။ သို့သော်လည်းဘဲ ဒီတိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်ဟာ ကျွတ်တော်တို့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး ရာဇ၀င်မှာတော့ အင်မတန် ထူးဆန်းတဲ့ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်တမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်တွေဟာ အခြား နိုင်ငံတွေမှာလဲဘဲ အသီးသီး ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘူးတယ်။ အဲဒီ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ တိုင်းပြည် တွေရဲ့ အခြေအနေ အရ အမျိုးမျိုး ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ သက်သေ သာဓကတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ကာ သဘောတရားသက်သက်နဲ့ ကြည့်ပြီး ပြောရမယ်ဆိုယင် တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်ဆိုတာဟာ ဘာဖြစ်လို့ ပေါ်ပေါက်လာရသလဲ။ ဆိုယင် တိုင်းပြည်အသစ်တည်လို့ တိုင်းသစ် ပြည်သစ် နိုင်ငံသစ် တည်ထောင်ဖို့ အတွက် ပေါ် ပေါက်လာရခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ အဲဒီလို သဘောတရားမှာ ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဗမာ့ စာပေနယ်မှာ ကြည့်မယ်ဆိုယင် ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာအစဆိုပြီး ဖွဲ့တဲ့ အခါတုန်းက မဟာ သမ္မတမင်း မြှောက်ကြတယ်ဆိုပြီး လူတွေ စုရုံးပြီး မြှောက်ကြတဲ့ အစည်းအဝေးမျိုးက ကမ္ဘာကြီးမှာ ပဌမဆုံး တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်လို့ဘဲ ဆိုရမှာဘဲ။
အဲဒီတော့ အဲဒီနိုင်ငံသစ် တည်ထောင်စရာရှိတဲ့ အခါမှာ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော် ဆိုတာ ပေါ်လာစမြဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံအသစ် ဆိုတဲ့ သဘောကိုလဲ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို အခြားနိုင်ငံ က နေပြီးတော့ အုပ်စိုး လွှမ်းမိုးထားလို့ အဲဒီ လွှမ်းမိုး အုပ်စိုးခြင်းကို တွန်းလှန် ပယ်ဖျက်ပြီးတဲ့နောက် မိမိတို့ တိုင်းပြည် မိမိတို့ အစိုးရ ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်း တည်ထောင်ဖို့ အတွက် တိုင်းပြုပြည်ပြု လုပ်တာက တမျိုး၊အဲဒီလို တိုင်းသစ် ပြည်သစ် နိုင်ငံသစ် အတွက် တမျိုးက ကျွန်တော်တို့ အားလုံး သတင်းစာတွေမှာလဲဘဲ ခဏခဏ ဖတ်နေရမှာဘဲ။ ဆိုဗီယက် ယူနီယံခေါ်တဲ့ နိုင်ငံကြီးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၃၀ လောက်က တော်လှန်ရေး အကြ်ီးအကျယ် ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီလို တော်လှန်ရေး အကြ်ီးအကျယ် ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် သူလဲ နိုင်ငံသစ် ဖြစ်လာတယ်လို့ ပြောရမှာဘဲ။ ဘယ်လို နိုင်ငံသစ် ဖြစ်လာသလဲဆိုယင် ခေတ်ဟောင်း ခေတ်ဆွေးတွေကို မှီခိုနေတဲ့ ဇာဘုရင်စံနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ တိုင်းပြည် ဟောင်း ၊စံနစ်ဟောင်းကြီးကို တော်လှန် တွန်းလှန်ပစ်ပြီးတဲ့ နောက် အသစ်ကျပ်ချွတ် ပြန်ပြီးတော့ကာ တိုင်းပြည်ကို စံနစ်တမျိုးနှင့် တည်တဲ့ အတွက်ကြောင့် အဲဒီ နိုင်ငံ အသစ်က တမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ ဒီနိုင်ငံသစ်ကတော့ အခြားလူမျိုးခြား အောက်မှာ ရောက်ပြီးတော့မှ ဖြစ်လာတဲ့ နိုင်ငံသစ်မျိုး မဟုတ်ဘဲနဲ့ ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း ဖြစ်တဲ့ လူတန်းစား အချင်းချင်းရဲ့ ချုပ်ချယ် အုပ်စိုးမှုမှ လွတ်မြောက်လာပြီးတဲ့နောက် နိုင်ငံသစ် ထူထောင်တဲ့ နည်းဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ နိုင်ငံသစ်ဆိုတာဟာ အကြမ်းအားဖြင့် ဆိုလို့ ရှိယင် အဓိပ္ပါယ် နှစ်မျိုး ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဗမာပြည်လို လက်အောက်ခံ နိုင်ငံတွေ အဖို့မှာတော့ နိုင်ငံသစ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဟာ လူမျိုးခြားရဲ့ လက်အောက်က လွတ်မြောက် ပြီးတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ၊ကိုယ့်ထီး ကိုယ့်နန်း၊ ကိုယ့်အစိုးရ နဲ့ ကိုယ့်မင်း ကိုယ့်ချင်းနဲ့ ထည်ထောင် လာတဲ့ နိုင်ငံသစ် လို့ဆိုရတယ်။ သို့သော်လဲ လွတ်လပ်တဲ့ နိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်လူမျိုး အချင်းချင်း အုပ်စိုးတဲ့ အဲဒီလို တိုင်ပြည်တွေမှာတော့ကာ ချည့်ချည့်နဲ့နဲ့ အစိုးရ စံနစ် အဆောက်အအုံ တခုလုံးကို ပြောင်လဲဖျက်ဆီးပစ်ပြီးတဲ့နောက် အသစ်ကျပ်ချွတ် ပြန်ပြီးတော့ စံနစ်တမျိုး တိုင်းပြည်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံသစ်၊တိုင်းပြည်သစ် တခုကို ထူထောင်ဖို့က တမျိုး အဲဒီလို နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။
အဲဒီလို နှစ်မျိုးရှိတဲ့ အခါမယ် နှစ်မျိုးစလုံး ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အချိန်အခါမျိုးမှာ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်ဟာ ထုံးစံအားဖြင့် ပေါ်လာစမြဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်ဟာ ဘာဖြစ်လို့ ပေါ်လာစမြဲ ဖြစ်သလဲ ဆိုယင် အဲဒီ တိုင်းပြည် အသစ်၊ နိုင်ငံ အသစ် ဖြစ်နေတော့ ပြန်ပြီးတော့ကာ ဥပဒေတွေ ၊စံနစ်တွေ အကုန် အသစ်ပြန်ပြီး ရေးဆွဲ ရမယ် ဖြစ်တော့ အခြေခံက စပြီးတော့ ပြန်ပြီးတော့၊ ဥပမာအားဖြင့် ရှိနေတဲ့ အိမ်ဟောင်း ကို တည်ရုံ အလုပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ တခုလုံး ဖျက်ဆီးပြီးတဲ့နောက် အဲဒီ ပျက်သွားတဲ့ နေရာမှာ ထပ်ပြီး အိမ်သစ်ဆောက်တာနဲ့ တူပါတယ်။ အဲဒီလို အိမ်သစ်ဆောက်တဲ့ အခါမှာလဲ ဒီနိုင်ငံသစ်ကို ဘယ်လိုစံနစ်၊ဘယ်လို စီမံကိန်း မျိုးနဲ့ တည်ဆောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကာ အင်ဂျင်နီယာတို့၊ ဗိသုကာ အတက်ဆရာတို့က ပဌမရှေးဦးစွာ အိမ်ပုံစံတွေ ရေးဆွဲပြီး တော့ကာ ဒီအိမ်ပုံစံအရ ငွေပေါင်း ဘယ်လောက်ကုန်မယ်။ ဘာဖြစ်မယ် စသည်အားဖြင့် ဒါတွေကို တွက်ချက်ပြီးတဲ့နောက် သေသေချာချာ နေ့ကောင်းရက်သား ရွေးပြီးတော့မှ အဲဒီလို အိမ်သစ် ဆောက်တာမျိုးဘဲ။ ယခုလဲဘဲ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသစ်ကို အဲဒီလို တည်ဆောက်ဖို့အတွက် တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်ကနေပြီးတော့ကာ ဒါတွေကို စီစဉ် ရေးဆွဲရပါလ်ိမ့်မယ်။ စီမံကိန်းချရ ပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်လို တိုင်းပြည်ရဲ့ နိုင်ငံသစ်ရဲ့ ပုံစံဟာ ဘယ်လိုရှိသင့်တယ်ဆိုတာကို တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်ကနေပြီးတော့ကာ ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒီလိုဆိုတော့ကာ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်ရဲ့ တာဝန်ဟာ ဘာလဲ ဆိုယင် နိုင်ငံသစ် ထူထောင်ဖို့ တာဝန် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ နိုင်ငံသစ် ထူထောင်ဖို့ဟာ သာမာန်အားဖြင့် ပြောရမယ်ဆိုယင် ဘယ်တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်မဆို အချုပ်အခြာ အာဏာနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်မျိုးသာ ဖြစ်ရမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုလို့ရှိယင် နိုင်ငံသစ် တည်ထောင်ရအောင် ဆိုလို့ရှိယင် အဲဒီနိုင်ငံသစ်ကို တည်ထောင်ဖို့ အတွက် ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်ဟာလဲ အချုပ်အခြာ အာဏာရှိဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလို အချုပ်အခြာ အာဏာနဲ့ မပြည့်စုံလျှင်လဲ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ နိုင်ငံသစ်ကို တည်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီတော့ကာ ယခု ပြောတဲ့ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်ဟာ ကမ္ဘာနိုင်ငံရေး ရာဇ၀င်မှာ အတော်လေး ထူးဆန်းတဲ့ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ ဘာဖြစ်လို့ ပြောခဲ့သလဲ ဆိုလို့ရှိယင် ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော် ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အခြေအနေနဲ့ အခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော် အခြေအနေနဲ့ ကွာခြားနေတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်။ အဲဒီလို ကွာခြားမှုတွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်ဟာလဲ ထူးထူးခြားခြား ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းတွေ ရှိနေပါတယ်။ အခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ ဥပမာ ယခင် ခေတ်တွေက ဟိုရှေးတုန်းက တော်လှန်ရေး ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်ဆိုတာမျိုး ပေါ်ပေါက် ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီလို ပေါ်လာတဲ့ အခါမှာလဲ ဒီတိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်ဟာ အာဏာရပြီးသား လွှတ်တော်ဖြစ်နေတယ်။ ယခုအခါ ဒီစစ်ကြီး ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် ပြီးခဲ့တဲ့ စစ်ကြီး အတောအတွင်းမှာ ပြင်သစ် ပြည်တို့ ယူဂိုဆလေး ဗီယားတို့ဟာ ဂျာမန်တွေရဲ လက်အောက်ကို ရောက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီလို ဂျာမန်တွေရဲ့ လက်အောက်ကို ရောက်ပြီးတဲ့ နောက် ပြန်ပြီးတော့ ဂျာမန်တွေကို တွန်းလှန် မောင်းထုတ်ပြီးတဲ့နောက် ကိုယ့်တိုင်းပြည် မယ် ပြန်ပြီးတော့ ဂျင်နရယ် တီတိုး အစရှိသည်အားဖြင့် ပြန်ရောက် လာကြတော့ကာ ပြန်ပြီးတော့ တိုင်းသစ် ပြည်သစ် နိုင်ငံသစ်ကို ဖော်ရတယ်။ အဲဒီလို ဖော်ဖို့အတွက် တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်ဆိုတာ တခါ ထပ်ပြီး လုပ်ရသေးတယ်။ အဲဒီလို လုပ်တဲ့ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်ဟာ မိမိတိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ကိစ္စမှန်သမျှကို ချက်ချင်း ဥပဒေအတည် ဖြစ်စေပြီး တော့ တတိုင်းတပြည်လုံးရဲ့ အာဏာစက်တည်အောင် လုပ်နိုင်တယ်။ ချက်ချင်း လုပ်လိုက်တယ်။ အဲဒီတော့ကာ အဲဒါမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ နောက် အမေရိကန်ပြည်မှာ ဆိုလို့ရှိယင် လဲ ပဌမရှးဦးစွာ အင်္ဂလိပ်များ လက်အောက်မှာ လူတမျိုး တည်း အဖြစ် နေကြပြီးတဲ့နောက်၊ အင်္ဂလိပ်ပြည်ကရှိတဲ့ အင်္ဂလိပ်အစိုးရကို အကျေနပ်လို့ တော်လှန်ပြီးတော့ကာ လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲတွေ၊ စစ်ပွဲကြီး ဆင်နွှဲပြီးတဲ့နောက် နိုင်တဲ့ အခါကျတော့ကာ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်ဆိုတာ ကျင်းပခဲ့တယ်။ နည်မည်တော့ အမျိုးမျိုး ခေါ်ခဲ့တယ်။ သို့ပေမဲ့ သဘောကတော့ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်ပါဘဲ။ အဲဒီ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော် ကျင်းပတဲ့ အခါတုန်းကလဲဘဲ သူတို့ဟာ အာဏာရပြီး အခြေအနေမှာ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်ကို ကျင်းပတယ်။
သို့သော်လဲဘဲ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ကတော့ ယခု တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော် ကျင်းပ နေတဲ့ အချိန်အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်က အာဏာရပြီးတဲ့ အခြေအနေ မရောက် သေးပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော် အခြေအနေဟာ ဘာနဲ့ တူသလဲ ဆိုယင် တောင်ပိုင်း အိုင်ယာလန်မှာ ကျွန်တော်တို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၇ နှစ်လောက်တုန်းက ဖြစ်တဲ့ အခြေ အနေမျိုးနဲ့ တူပါတယ်။ အဲဒီ အိုင်ယာလန်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေမျိုးက ဘယ်လို ဖြစ်သလဲဆိုယင် ပဌမ အင်္ဂလိပ် အစိုးရကို ကမ္ဘာစစ်ကြီး အတေားအတွင်း ဆူပူတော်လှန်တာတွေ ဖြစ်ပြီးတော့ နောက်ဆုံးစစ်ပြီးတဲ့ အခါမှာ ဒီသူပုန်ကိစ္စတွေဟာလဲ ရပ်သွားတယ်။ အဲဒီလို ရပ်သွားပြီးတဲ့ နေ်ာက်မှာ တခါ ဒီအင်္ဂလိပ် အစိုးရနဲ့ အိုင်ယာလန် ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီးတော့ကာ စာချုပ် ချုပ်ကြတယ်။ စာချုပ် ချုပ်ကြပြီးတဲ့ နောက် သူတို့ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်ဆိုတာ လုပ်တယ်။လုပ်တဲ့အခါမှာ အိုင်ယာလန် ဟာ အာဏာ မရသေးပါဘူး။ သို့သော်လဲ ဘဲ ယခု ကျွန်တော်တို့ ရတဲ့ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်ဟာ အဲဒီ အိုင်ယာလန် လွှတ်တော် လုပ်တဲ့ အခြေအနေတုန်းကထက် သာတဲ့ အခြေအနေတွေလဲ ရှိတယ် ဘယ်လိုသာနေတဲ့ အခြေအနေတွေ ရှိသလဲ ဆိုယင် ဟိုးတုန်းက အိုင်ယာလန်ပြည်မှာ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်လုပ်ရတဲ့ အချိန်အခါ တုန်းက ဆိုယင် အဲဒီ ပဌမ ကမ္ဘာစစ်ကြီး ပြီးတဲပ အခါမှာ ဗြိတိသျှ နယ်ချဲ့သမားဟာ အင်အား ဘာမှလျော့ပါးသွားတာ မရှိပါဘူး။ ဒီအတောအတွင်း တုန်းက ဗြိတိသျှ နယ်ချဲ့ သမားတွေဟာ အမှန်စင်စစ် စစ်နိုင်ပြီး အတော်ဘဲ တောင့်တောင့် တင်းတင်း နိုင်ငံကြီး တနိုင်ငံ ဖြစ်တယ်။
ယခု ဒီကမ္ဘာစစ်ကြီး ပြီးတဲ့နောက် ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့စံနစ်ရဲ့ အခြေအနေကတော့ အင်မတန် မှဘဲ အားနည်းသွားတဲ့ အခြေအနေ ရောက်တယ်။ ဘယ်လောက်ထိတောင် အားနည်း သွားသလဲ ဆိုယင်ဘိလပ်ကို ရောက်တဲ့လူတွေ ဆိုယင် ပိုပြီးသိမယ်။ ဟိုမှာ ကြာကြာ နေလို့ရှိယင် တွေရမယ်။ အဲဒီလို ဗြိတိသျှ နယ်ချဲ့စံနစ်ဟာ အင်မတန် အင်အားနည်း လာတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ဒီတိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော် ပေါ်ပေါက်လာရတဲ့ အခါဖြစ်တဲ့ အတွက် ဟိုအိုင်ယာလန် ပြည်တုန်းက တိုင်းပြု ပြည်ပြုလွှတ်တော်မျိုးကတော့ အမှန် စင်စစ် ဒိုမီနီယံ အဆင့်အတန်း ဖြစ်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမျိုးကိုသာ ရေးဆွဲဖို့ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး လောက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လဲဘဲ ကျွန်တော်တို့ အခု ရထားတဲ့ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်ကတော့ကာ ကိုယ်ကြိုက်ရာ ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ဟာကို အင်္ဂလိပ် အစိုးရက သဘောတူပြီးသား ဖြစ်တဲ့အတိုင်း ဒီနေရာမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြဲပြည်ပြု လွှတ်တော်က အိုင်ယာလန်ပြည်က ဟိုးအခါတုန်းက ရတဲ့ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်ထက် တပန်းသာနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ကာ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်ဟာ ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ ပေါ်လာပြီး အဲဒီလို ထူးခြားတဲ့ အချက်တွေ ရှိပါတယ်။ တခါ အိန္ဒိယပြည်မှာ ရှိတဲ့ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဗမာပြည်မှာ ရှိတဲ့ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ဖို့ လိုပါသေးတယ်။ အိန္ဒိယပြည်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်နဲ့ ကျွန်တော် တို့ ဗမာပြည်မှာ ပေါ်လာတဲ့ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်နဲ့ အဆင်တူတဲ့ အချက်တွေ ရှိတယ်။ မတူတဲ့ အချက်တွေလဲရှိတယ်။ တူတဲ့ ချက်တွေဆိုတာကတော့၊ အခုတင်က အိုင်ယာလန်ပြည်မှာ ဖြစ်တာမျိုးနဲ့ သိပ်ပြီးတော့ မခြားပါဘူး။ အဲဒီသဘောမျိုးအတိုင်း ဘဲ။ တိုင်းပြည်က အာဏာမရခင် ရှေးဦးစွာ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော် ပေါ်ပေါက်လာရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လဲဘဲ အိန္ဒိပြည်မှာရှိတဲ့ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်ကို လုပ်တဲ့ အခါတုန်းက ဘယ်ကနေပြီး လုပ်လိုက်သလဲဆိုယင် ပြည်န်ာအမှာရှိတဲ့ ဥပဒေပြု လွှတ်တော်တွေကနေပြီး ရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလို ရွေးကောက် တင်မြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာလဲ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော် ရွေးကောက် သလို သေသေ ချာချာကြီး၊ဥပမာ နိုင်ငံခြားသားတွေ မပါရဘူး။ ဘာ၊ညာ စသည်ဖြင့် အဲဒီလို မဟုတ်ဘဲနဲ့ နားလည်မှုနဲ့ နေပြီး၊ ဥရောပတိုက်သားတွေက မင်းတို့ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော် ရွေးတာထဲမှာ မပါပါဘူးဆိုတဲ့ ဖယ်နေတဲ့ သဘောမျိုးသာ ဖြစ်တယ်။ ဒါတောင်မှ ပြည်နယ်တနယ်မှာ သူတို့ ဖယ်မနေကြပါဘူး။မဲပေးတဲ့ နေရာမှာ ၀င်ပါကြတယ်။ သို့သော်လဲ အကုန်ခြုံကြည့်လိုက်မယ် ဆိုယင်ဖြင့် သူတို့ဟာ သူတို့ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်ကို လွတ်လွတ် လပ်လပ် လုပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးတော့ ရောက်သင့်သလောက် ရောက်ပါတယ်. ရောက်ပြီးတဲ့နောက် အဲဒီ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်မှာ “မွတ်စလိ(ခ်) ခေါ်တဲ့ မူဆလင် အဖွဲ့ချုပ်ကြီးက ကိုယ်စားပြုတွေ အမြောက်အမြားလဲ ပါလာပါတယ်။ အဲဒီလို တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်မှာ ကိုယ်စားလှယ် အမြောက်အမြား ပါလာတဲ့ အခါမှာ မူဆလင်လိ(ခ်) က ကိုယ်စားလှယ် အမြောက်အမြားနဲ့ ကွန်ဂရက် ကိုယ်စားလှယ် အမြောက်အမြား အားလုံး စုပေါင်းပြီး ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ လုပ်ကြမယ်ဆိုယင်တော့ အင်မတန် အင်အားကောင်းတဲ့ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်ကြီး ဖြစ်သွားမှာဘဲ။ သို့သော်လဲဘဲ မူဆလင် အစည်းအရုံးကြိးကနေပြီး ဟိုဒင်း မကျေနပ်နိုင်ဘူး၊ ဘာလုပ်ပေးရမယ်။ ညာလုပ်ပေးရမယ် စသဖြင့် စည်းကမ်းချက်တွေ အမျိုးမျိုးနဲ့ တောင်းဆိုင်္ပြီး အဲဒါမျိုးတွေ လုပ်ပါတယ်။
နောက် ကွန်ဂရက်အဖွဲ့ဖက်က ခေါင်းဆောင်တွေကလဲ ဒီတခါတုန်းက မူဆလင် အစည်း အရုံးကြီးကို အင်မတန်ဘဲ မထေမဲ့မြင် လုပ်တာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို နှစ်ဦးနှစ်ဖက် တဦးနှင့် တဦး အစေးမကပ်ဘဲ ဖြစ်တော့ မူဆလင် အစည်းအရုံးကြီးက တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော် အမတ်တွေဟာ တေ်ာတော်များတယ်။ အဲဒီလူတွေဟာ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်ထဲမှာ ဒို့မပါဘူးဆိုပြီးတော့ ဖယ်နေကြတယ်။ ရှောင်နေကြတယ်။ အဲဒီလို ရှောင်နေတဲ့အတွက် ကွန်ဂရက် အဖွဲ့ဝင်တွေ ဖြစ်တဲ့ အမတ်များလောက်သာ အဲဒီ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော် ထဲမှာ ရှိပြီး တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်ဟာ တော်တော်ကလေး ပျက်ပြယ်ပြယ် ဖြစ်သွားပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက် ယခု နောက်ဆုံးကျတော့ (မူဆလင်) အစည်းအရုံးနှင့် ကွန်ဂရက် အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဟာ စေ့စပ်လို့ အရနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုး ရောက်သွားတော့ အင်္ဂလိပ် အစိုးရကနေပြီး ကြားဖြန်ပေးတဲ့အတွက် ယခု နောက်ဆုံး အခြေ အနေကတော့ ချက်ချင်း လက်ငင်း ယခု ဩဂုတ်လမှာ ကွန်ဂရက်ပိုင်တဲ့ ပြည်နယ် တွေကိုလဲ ဒိုမီနီယံ တခု သတ်သတ် လုပ်ပေးမည်။ နောက်ပြီးတော့ မူဆလင်တွေ ပိုင်တဲ့ ပြည်နယ်တွေကို ပါကစ္စတန်ခေါ်ပြီးတော့ ဒိုမီနီယံတခု သတ်သတ် လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး အဲဒီလို နောက်ဆုံးကျတော့ နှစ်ဖက် သဘောတူကြတဲ့ အခြေအနေမျိုး ရောက်တယ်။ ရောက်ပြီးတဲ့နောက် အဲဒီ ပါကစ္စတန် ဆိုတဲ့ ဒိုမီနီယံမှာလဲ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော် တခု သတ်သတ်ပေါ်မယ်။ တောက်ပြီးတော့ အိန္ဒိယလို့ ခေါ်မည့် (ဟိန္ဒူစတန်မခေါ်ဘူး) ကွန်ဂရက်ပိုင်တဲ့ ပြည်နယ်တွေကိုတော့ အိန္ဒိယလို့ လေါ်ပြီး တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော် ကလဲ တခု သတ်သတ် ရှိရဦးမှာဘဲ။ အဲဒီလို နှစ်ခုရှိပြီးတော့ မဟာရာဂျာတွေ ပိုင်တဲ့ ပြည်နယ်တွေလဲ အိန္ဒိယပြည်မှာ အမြောက်အမြား ရှိပါသေးတယ်။
အဲဒီ မဟာရာဂျာတွေပိုင်တဲ့ နယ်တွေဟာ ဘယ်လောက်ကြီးသလဲ ဆိုယင် မဟာရာဂျာ တယောက်ပိုင်တဲ့ နယ်တချို့တလေဟာ ကျွန်တော်တို့ ဗမာပြည် နီးပါးလောက်ကြီးတဲ့ နယ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မဟာရာဂျာတွေ ပိုင်တဲ့ နယ်တွေထဲမှာ ဆိုယင် ဗမာပြည်လောက် ကြီးတဲ့ နယ်တွေ တော်တော်များများ လောက်ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ကာ အဲဒီ မဟာရာဂျာ တွေပိုင်တဲ့ နယ်တွေလဲဘဲ တဖက်ဖက်ပါဖို့ ကောင်းတယ်လို့ အင်္ဂလိပ် အစိုးရက ဆိုပေမဲ့ ဒီလူတွေက ဒို့မပါဘူး။ ဒို့ဖာသာဒို့ သီးသန့်နေမယ်ဆိုယင် နေနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုး ရှိတယ်။ အဲဒီောလာက် အိန္ဒိယရဲ့ နိုင်ငံရေး အခြေအနေကတော့ အင်မတန်ကိုဘဲ ရှေ့ကို ရှုပ်ထွေးဦးမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့က မြင်နေပါတယ်။
ဒီတော့ကာ အင်္ဂလိပ်အစိုးရက ဒိုမီနီယံ ပေးထားတာက ဘ်ာလိုပေးလိုက်သလဲဆိုတော့ မင်းတို့ ဒိုမီနီယံ ယခုယူထားပါ။ နောက်ပြီးတော့ကာ မင်းတို့ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော် အသီးသီးကနေပြီး လုံးဝ လွတ်လပ်ရေး လိုချင်တယ်ဆိုယင်မင်းတို့ ဆုံးဖြတ်ယူ။ သဘောရှိအတိုင်းဘဲ။ သို့သော်လဲ အခုချက်ချင်း လက်ငင်းအားဖြင့် ဒိုမီနီယံဘဲယူထား။ ယူထားပြီးနောက် မင်းတို့ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်ကနေပြီးတော့ကာ လွတ်လပ်ရေးကို ဒို့ အင်္ဂလိပ်(Commonwealth) ကနေပြီးတော့ ထွက်သွားချင်တယ်ဆိုယင် မင်းတို့ ထွက်သွားနိုင်တယ် ဆိုပြီးတော့ ပြောထားတယ်. ပြောထားပေမဲ့ တကယ် လက်တွေ့ မှာတော့ အင်မတန်ဘဲ သူတို့မှာ အင်္ဂလိပ် (Commonwealth) က နေပြီးတော့ ထွက်ဖို့ ခဲယဉ်းတဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ ဘာပြုလို့လဲ ဆိုလို့ရှိယင် အင်္ဂလိပ် အစိုးရက မပေးမှာမို့လို့ မဟုတ်ဘူး။ အချင်းချင်း ဂွကျနေလို့ အခက်အခဲ အမျိုးမျိုး ရှိနေလို့ အင်္ဂလိပ် (Commonwealth) က မထွက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ နောက်ဆုံး တနေ့မှာ အင်္ဂလိပ် (Commonwealth) က ထွက်လာနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုး ရောက်လာသည့်တိုင်အောင် ချက်ချင်း မရောက်နိုင်သေးဘူး။ တော်တော်ကလေးကြာမှ အင်္ဂလိပ် (Commonwealth) က ထွက်လာတဲ့ အခြေအနေမျိုး ရောက်လာတယ်။ အဲဒီ အခြေအနေက ဘာပြုလို့ဆိုယင် အခု ပါကစ္စတန်နှင့် အိန္ဒိယပြည်ဆိုပြီးတော့ နှစ်ခုခွဲ ပြီးတော့ ခွဲထွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိယင် နယ်တွေကိုလဲ ခွဲရဦးမယ်။
ဥပမာ ဘင်္ဂလားပြည်ဆိုလို့ရှိယင် မူဆလင်တွေများတဲ့ အပိုင်းရှိတယ်။ ဟိန္ဒူတွေများတဲ့ အပိုင်းရှိတယ်။ အဲဒီတော့ကာ အဲဒီအပိုင်းတွေလဲ ခွဲရအုံးမယ်။ အာသံပြည်မှာ အချို့နယ် တွေမှာ လူတွေရဲ့ဆန္ဒကို မေးရဦးမယ်။မင်းတို့ဟာ ပါကစ္စတန်ဖက် ၀င်ချင်သလား၊ အိန္ဒိယ ဖက် နေချင်သလား စသဖြင့် ဒါတွေမေးရမယ်။ နောက်ပြီးတော့ တခါ ပန်ဂျပ်ပြည် မှာလဲ အဲဒါတွေလုပ်ရ ဦးမယ်။ (North-West Frontier Province)ဟာ မူဆလင်တွေနေတဲ့ နယ်ဖြစ်ပေမယ့် ကွန်ဂရက်ကို ထောက်ခံတဲ့ လူတွေက အစိုးရ ဖြစ်နေ တဲ့နယ်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီနယ်ကို အခုပြန်ပြီးတော့ကာ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ပြီးတော့ကာ မင်းတို့ဟာ ပါကစ္စတန် ဖက်ပါခင်သလား၊ အိန္ဒိယဖက်ပါချင်သလားဆိုတယ မေးရဦးမယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒါမျိုးတွေ လုပ်တဲ့အခါမှာလဲ အေးအေးလူလူနဲ့ ဖြစ်သလား၊ မဖြစ်ဘူးလား ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ စောင့်ကြည့်ဖို့ လိုလိမ့်မယ်။ တော်တော့်ကို ရှုပ်ရှုပ် ပွေပွေ ဖြစ်နိုင်စရာ အကြောင်းတွေ ရှိတယ်။ သူတို့ဆီမှာ အခုနေအခါမှာဆိုယင် လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းတွေ ဖြစ်နေတာ တွေရှိတယ်။ သို့ပေမဲ့ ဒီတခါကျတော့ကာ ဒီတခါမှာ ကွန်ဂရက်နှင့် မူဆလင်လိ(ခ်) တို့ သဘောမတူဘူးဆိုယင် လူမျိုးရေး အဖြစ်မျိုး မဟုတ်ဘဲနဲ့ တကယ့်ပြည်တွင်း စစ်သဘော ကိုရောက်ချင်ရောက်သွားနိုင်တယ်။ အဲဒါတမျိုးရှိတယ်။ နောက်ပြီးတော့တခါ စစ်တပ် (အိန္ဒိယစစ်တပ်) ဖွဲ့ရမယ်။ အိန္ဒိယစစ်တပ်ကို မူဆလင်လူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ လူတွေကို မူဆလင်ဖက်၊ပါကစ္စတန်ဖက် ပါချင်တဲ့ လူတွေကို ပါကစ္စတန်ဖက်ကို ခွဲရမယ်။ အိန္ဒိယ အစိုးရဖက်မှာ နေချင်တဲ့ လူတွေက်ို အိန္ဒိယ အစိုးရဖက် ခွဲရမယ်။ အဲဒီလို ဟာမျိုးတွေက လုပ်ရမှာ အမြောက်အမြားရှိတယ်။ အဲဒီလို လုပ်ရမည့် အလုပ်တွေက အများကြီး ရှိနေတော့ အဲဒီလိုလုပ်နေတဲ့ အချိန်အခါ အတောအတွင်းမှာ ဆိုယင် အိန္ဒိယပြည်ဟာ ပါကစ္စတန်ရော၊ အိန္ဒိယရော နှစ်ခုစလုံး ဒိုမီနီယံ အဖြစ်နဲ့ နေရမှာဘဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုယင် အင်္ဂလိပ် ကွန်မွန်ဝဲ(လ်) (Commonwealth) ကနေပြီး တိုးထွက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေကို ဖြစ်ကိုမဖြစ်နိုင်သေးဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုယင် ကိုယ့်မှာ စစ်တပ်က ကျကျ နန မရှိသေးဘူး။ နယ်ကျကျနန သတ်မှတ်လို့ မပြီးသေးဘူး။ စကားများနေတုန်း၊ တယောက်နဲ့ တယောက် အဲဒါမျိုးတွေ ဖြစ်နေတယ်။
အဲဒီတော့ အိန္ဒိယပြည်မှာ အဲဒီလို အခြေအနေမျိုးတွေ ဖြစ်နေတယ်။ ဖြစ်ပေမဲ့ ၊ တခု ထူးခြားသွားတာကတော့ ဘာထူးခြားသွားသလဲ ဆိုယင် ခုတင်က ပါကစ္စတန်တို့၊ အိန္ဒိယတို့မှာ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ယခုသီးခြား ပေါ်ပေါက်ကြမယ့် တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်တွေဟာ ယခုတော့တခုဘဲ ရှိတယ်။ ဒီတခုကလဲဘဲ မူဆလင်လိ(ခ်) မပါဘူး။ မူဆလင်လိ(ခ်)ကအမတ်တွေက ပါကစ္စတန် ဒိုမီနီယံဖက်မှာ လုပ်ချင်တာက တိုင်းပြု ပြည်ပြုလွှတ်တော် လုပ်မယ်နဲ့တူတယ်။ ဒီတော့ အဲဒီလိုလုပ်ပြီး တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တေ် ပေါ်ပေါက်တဲ့အခါမှာ အဲဒီ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော် နှစ်ခုစလုံးဟာ အချုပ်အချာ အာဏာပိုင်တဲ့ လွှတ်တော်အဖြစ် ချက်ချင်းရောက်သွားမယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ချက်ချင်း ရောက်သွားမလဲဆိုယင် ဒိုမီနီယံဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဟာ ဥပဒေသဘောအားဖြင့် ပြောရမယ် ဆိုယင် (Semi-sovereign state) အချုပ်အချာ အာဏာရှိသင့်သလောက်ရှိတယ်။ သို့သော်လဲဘဲ ရုပ်ပြအားဖြင့် မရှိဘူး။ (Formal sovereignty) မရှိဘူး။ (Formal sovereignty) ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ရုပ်ပြအချုပ်အချာ အာဏာပိုင် မရှိဘူး။ ဘယ်လို အချုပ်အချာ အာဏာမရှိဘူးလဲဆိုယင် ဒီအင်္ဂလိပ် ရှင်ဘုရင်ရဲ့ သစ္စာကို စောင့်သိ ရိုသေရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ရှိတယ်။ အဲဒီသဘောမျိုးရှိနေတဲ့အတွက် ရုပ်ပြ အချုပ်အချာ အာဏာမှရှိဘူးလို့ ဆိုရမယ်။ အဲဒါတောင်မှ ဥပမာ အိုင်ယာလန်မှာလို့ဆိုယင် အတော်ထူးခြားတဲ့ အခြေအနေရောက်နေတယ်။ အိုင်ယာလန်ပြည်ဟာ အင်္ဂလိပ် ရှင်ဘုရင်ကို သစ္စာစောင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ အပိုဒ်ကို ဖျက်လိုက်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဘယ် ရှင်ဘုရင်မှ မထားတော့ဘူး။ သို့သော်လဲ နိုင်ငံခြား ဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာ တခါ၊ အင်္ဂလိပ် ရှင်ဘုရင်ကို အသုံးချတယ်။ အသုံးချရုံဘဲ ချတယ်။ သို့သော်လည်း သူတို့ သစ္စာတော့ မဆိုဘူး။ နောက်ပြီးတော့ သူတို့တိုင်းပြည်မှာလဲ သမ္မတလို သဘောထားမျိုးရှိတယ်။ နန်းရင်းဝန်လို့ ခေါ်တဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်အပြင် သမ္မတ ဆိုတဲ့ လူစားမျိုးလဲ အိုင်ယာလန်မှာ ရှိတယ်။ သို့သော်လဲဘဲ သူတို့တိုင်းပြည်ကို အိုင်ယာလန်လို့ခေါ်တယ်။ ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲ ဆိုတာ ကျွန်တော်လဲ မပြောတက်ဘူး။
အဲဒီမယ် အိုင်ယာလန်လို့ ခေါ်တဲ့အတွက် သူတို့ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို လိုက် ကြည့်တဲ့ အခါကျတော့ သူတို့ဆိုသွားတာတွေကတော့ (It is independent, democratic sovereign state) လုံးဝလွတ်လပ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ စံနစ်အရ အချုပ်အချာ အာဏာနှင့် ပြည့်စုံတဲ့ နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်လို့ အဲဒီလိုလဲသာမာန် ဆိုထားတယ်။ သမ္မတ နိုင်ငံရယ်လို့တော့ သေသေချာချာ တိတိလင်းလင်း ဆိုမထားပါဘူး။ အဲဒီလို သမ္မတနိုင်ငံ လို့ တိတိ လင်းလင်း ဆိုမထားတဲ့ အတွက် အိုင်ယာလန်ပြည်မှာ တောင်မှ အချို့သူတွေ ဟာ အငြင်းထွက်နေကြတယ်။ ဥပဒေ သဘောအရ သမ္မတနိုင်ငံ မဟုတ်ဘူး။ ဥပဒေ သဘောအရဆိုလို့ရှိယင် အင်္ဂလိပ် ပြည်ထောင်စု အတောအတွင်းမှာရှိတယ်။ ဘာ၊ညာ အစရှိသဖြင့် အငြင်းထွက်နေကြတယ်။ ဘယ်လိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ် သူတို့ အခြေအနေကတော့ အတော်ဘဲ ထူးဆန်းတယ်။ အဲဒီတော့ကာ နိုင်ငံရေး ဆရာတဦးက နေပြီးတော့ အိုင်ယာလန်ပြည်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘယ်လို ပြောဘူးသလဲ ဆိုယင်၊ ကျွန်တော် မှတ်မိ သလောက် ပြောရမယ်ဆိုယင် (Eire is in the Commonwealth but not of it.) အဲဒါ (Commonwealth) အတွင်းမှာလို့ ပြောချင်ပြောနိုင်ပေမဲ့ (Commonwealth) ရဲ့ နိုင်ငံလဲ မဟုတ်ဘူးတဲ့ ၊နောက်ပြီးတော့က တခါ ဒီဗလီယာက တခါတုန်းကပြေားဘူးတဲ့ စကားရှိတယ်။ သူက ဘယ့်နယ်ပြောသလဲ ဆိုယင် အင်္ဂလိပ် အစိုးရက ဒို့အိုင်ယာလန် တိုင်းပြည်ဟာ အင်္ဂလိပ် (Commonwealth) ထဲမှာ ပါတယ်လို့ သူတို့ဖာသာ သူတို့ထင်လို့ရှိယင် ထင်ချင်တာ ထင်စေပေါ့တဲ့၊ ဒို့လဲဘဲ ဒို့လုပ်ချင်တာ လုပ်ပေါ့တဲ့။ အဲဒီလို ဒီဗလီရာက ပြောတယ်။ အဲဒီတုန်းက အိုင်ယာလန်ရဲ့ အခြေအနေဟာ အင်မတန်ဘဲ ထူးဆန်းတယ်။ သို့ပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ သိနေကြတာက သူကို ဒိုမီနီယံလို့ဘဲ သိနေတယ်။
အိုင်ယာလန်လို ထူးခြားတဲ့ ဒိုမီနီယံကို အပထားလို့ရှိယင် အခြား ဒိုမီနီယံတွေကတော့ အင်္ဂလိပ် ဘုရင်တွေကိုဘဲ သူတို့ ဘုရင်တွေ အဖြစ်နဲ့ထားတယ်။ ဘာပြုလို့လဲ ဆိုယင် အိန္ဒိယပြည်အတွက်တော့ ကျွန်တော် မပြောလိုဘူး။ ကနေဒါတို့၊ဩစတြေးလျားတို့ တောင်အာဖရိကတို့ဆိုတဲ့ ဒိုမီနီယံတွေကတော့ သွေးတူသားတူ ဥရောပတိုက်သား တွေကနေပြီးတော့ ဆင်းလာတဲ့ လူတမျိုးထဲလို လူစားတွေဖြစ်တော့ အကုန်လုံး မျက်နှာဖြူ လူမျိုးတွေချည်းဘဲ။ ဥရောပတိုက်လူမျိုးတွေချည်းဘဲ။ အဲဒီလိုဖြစ်နေတော့ သူတို့အဖို့မှာ အင်္ဂလိပ်ရှင်ဘုရင်ကို ကိုယ့်ရှင်ဘုရင်လို့ဆိုပြီး ယူဆဖို့ မခဲယဉ်းဘူး။ မခဲယဉ်း တဲ့အတိုင်း သူတို့ကိုယ်တိုင်က ကြည်ဖြူပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်ရှင်ဘုရင်ကို ကျုပ်တို့ ရှင်ဘုရင်အဖြစ် ထားပါဆိုပြီးတော့ သူတို့က ကြည်ဖြူလို့ထားကြတယ်။ အဲဒီတော့ ဒိုမီနီယံဆိုတဲ့ သဘောကတော့ အင်္ဂလိပ်နဲ့ တသဘောတည်း၊အင်္ဂလိပ်နဲ့ တအိမ်ထောင် တည်း သဘောမျိုးနဲ့ နေကြတာဘဲ။ သို့သော်လဲဘဲ ဒီဥပဒေ သဘောအားဖြင့် ဆိုယင် သူ့တိုင်းပြည်သူ အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာ သူ့ဖာသာသူ အုပ်ချုပ်တာ၊ အဲဒီလို အုပ်ချုပ်တဲ့ အခါမှာ အဲဒီလို တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့၊လွှတ်တော်ဟာလဲဘဲ အာဏာရှိတဲ့ လွှတ်တော် ဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာတော့ အခု ကျွန်တော်တို့ ရထားတဲ့ အစိုးရဆိုတာက လက်တွေ့အားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ လုပ်နေတဲ့နေရာမှာတော့ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် လဲဘဲ(Status) ဆိုတဲ့ အဆင့်အတန်းမှာတော့ ကျွန်တော်တို့က အာဏာရှိတဲ့ အဆင့် အတန်း မဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ နိုင်ငံခြားတွေနဲ့ ဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ကို တခြားနိုင်ငံတွေက မေးတဲ့အခါမှာ မင်းတို့နိုင်ငံဟာ သမ္မတနိုင်ငံလား၊ လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံလား၊ဒါမှမဟုတ် ဒိုမီနီယံ နိုင်ငံလားဆိုယင် ကျွန်တော်တို့က ဘယ်လို ဖြေရမလဲဆိုယင် ကျုပ်တို့တော့ မသိဘူး။ လုပ်တော့ လုပ်နိုင်တယ်။ ကျုပ်တို့ တိုင်းပြည်ကို တော်တော်ကလေး အုပ်ချုပ်လို့ရတာဘဲ၊ရပေမဲ့ ဘယ်လို ခေါ်ရမယ်လို့တော့ ကျုပ်တို့လဲ မသိသေးဘူးလို့ အဲဒီလိုဘဲ ပြန်ဖြေရမယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ အခုအစိုးရရဲ့ အခြေ အနေဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ အစိုးရရဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေတော့ အိန္ဒိယပြည်မှာတော့ အခု ဩဂုတ်လမှာ ဆိုယင်ဒိုမီနီယံ အစိုးရ ဖြစ်သွားကြတဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့ အဆင့်အတန်းဟာ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရ အဆင့်မတန်းထက် မြင့်သွားမယ်။ မြင့်သွားပြီးတော့ အဲဒီဟာထက် ပိုပြီး အရေးကြီးတာက ဘာအရေးကြီးသလဲဆိုယင် သူတို့ရဲ့ နယ်တွေမှာ ပေါ်မဲ့ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်တွေဟာ အချုပ်အချာ အာဏာနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ လွှတ်တော်တွေ ဖြစ်သွားမယ်။ ဘယ်လို အချုပ်အချာ အာဏာတွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ လွှတ်တော်တွေ ဖြစ်သွားလဲဆိုယင် အဲဒီ လွှတ်တော်က ဆွဲတဲ့ ဥပဒေကို ချက်ချင်း အတည်ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ကာ ကျွန်တော်တို့ထက် အိန္ဒိယပြည်က တပန်းသာသွားတာလဲ ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ထက် လျော့သွားတာလဲ ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့က အဲဒီနေရာမှာ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်က အချုပ်အချာ အာဏာမရသေးဘူး။ မရသေးဘူးဆိုတာက ရအောင် လုပ်တဲ့နည်းတွေကတော့ အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့လေ။ နောက် ကျွန်တော် ပြောပြ မယ်။ဒီဥပဒေသဘော ပြောရမယ်ဆိုယင် ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော် ဟာ အချုပ်အချာ အာဏာ မရသေးဘူး။ အချုပ်အချာ အဖွဲ့ရဲ့ အဆင့်အတန်းသာ ရသေးတယ်။ (Status) အဆင့်အတန်းကသာလျှင် ကျွန်တော်တို့ အချုပ်အချာ လွှတ်တော်ရဲ့ အဆင့် အတန်းသာ ရတယ်။ သဘောကတော့ ယခု ကျွန်တ်ာတို့ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော် လုပ်ကြတယ်ဆိုယင် ဒီလွှတ်တော်ကို ဘုရင်ခံလာပြီးတော့ ရိုးရိုး ဥပဒေပြု လွှတ်တော် လာသလို လာပြီးတော့ စကားမပြောနိုင်ဘူး။ သူလာပြီးတော့ကာ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်ကို နားထောင်ချင်တယ်ဆိုယင် ဧည့်သည်အဖြစ်နဲ့ လာနားထောင်နိုင်တယ်။ ဘုရင်ခံ အဖြစ်နဲ့ လာပြီး ကျွန်တော်တို့ကိုဘာလုပ်ပါ။ ဘာလုပ်ပါလို့ မပြောနိုင်ဘူး။ ဒီတော့ ရိုးရိုး ဥပဒေပြု လွှတ်တော်ဆိုယင် အဲဒီ ဥပဒေပြု လွှတ်တော်ကို လာပြီး စကားပြော နိုင်တယ်။ အဲဒါမျိုးတွေ ဖြစ်တယ်။
အဲဒီတော့ အချုပ်အချာ အာဏာသဘောမျိုး အဆင့်အတန်း ဆိုပါတော့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော် သူ့ဟာသူ လုပ်တဲ့နေရာမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရှိတယ်။ အဲဒိလို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရှိတဲ့အတွက် (Status) အဆင့်အတန်းမှာတော့ကာ အချုပ်အချာ အာဏာအဖွဲ့ သဘောမျိုး ဖြစ်တယ်။ သို့သော်လဲဘဲ ဥပဒေသဘောနဲ့ ပြောမယ်ဆိုယင် အာဏာတော့ မရှိသေးဘူး။ အာဏာရအောင် လုပ်တဲ့နည်းကတော့ အခုတင်က အစီရင်ခံခဲ့တဲ့အတိုင်း ဖြစ်နေတော့ အိန္ဒိယပြည်က တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော် ဟာလဲဘဲ လွန်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေတုန်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်ထက် ဒီလိုဘဲ မခြားနားတဲ့ အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။
ယခုတော့ကာ အိန္ဒိယပြည်မယ်ရှိတဲ့ ပေါ်ပေါက်လာမဲ့ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ထက် ပိုပြီးတော့ကာ တဆင့်သာ သွားတယ်။ ဘယ်လိုသာသွားသလဲ ဆိုလို့ရှိယင် အချုပ်အချာလို အာဏာလို အဆင့်အတန်းတွင် မကဘဲနဲ့ အာဏာများပါရတဲ့ အခြေအနေမျိုး ရောက်သွားတယ်။ အဲဒီတော့ကာ အဲဒီလိုသာတဲ့ ဖက်ကလဲ သာတယ်။ သို့သော် သူတို့ရှော်တဲ့ ဖက်ကလဲ ဘယ်လိုရှော်သလဲ ဆိုတော့ သူတို့ကို အင်္ဂလိပ် အစိုးရက ဒိုမီနီယံပေးလိုက်တဲ့ အခါမှာလဲ အဲဒီ ဒိုမီနီယံအဖြစ်နဲ့ ဘယ်လောက်ကြာကြာ နေရသလဲဆိုယင် ဟိန္ဒူနဲ့ မူစလင် စေ့စပ်တဲ့ နေရာမှာ ကြာလျှင်ကြာသလောက် နေရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် အင်္ဂလိပ်အစိုးရက နေစေချင်လို့ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ အချင်းချင်း မတဲ့လို့နေရတဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီတော့ကာ ကျွန်တော်တို့ ဒီလွတ်လပ်ရေး ကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အဖွဲ့အချုပ်ကြီးက ၁၉၄၆ ခု၊ ဇန်န၀ါရီလမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ပထမ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အဖွဲ့ချုပ် ညီလာခံကြီးက ဗမာပြည်ဟာ လုံးဝလွတ်လပ်ရေးကို လိုချင်တယ်။ ဘယ်လို ဒိုမီနီယံ စတိတ်ကိုမှ မလိုချင်ဘူးဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ရည်ရွယ်ချက် မဖြစ်နဲ့ အတိအလင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ကြေညာခဲ့တဲ့ အတိုင်းပဲ ကျွန်တော်တို့ လွန်ခဲ့တဲ့ မေလအတွင်းမှာ ကျင်းပကြတဲ့ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ ပမာဏ ညီလာခံမှာလဲဘဲ ကျွန်တော်တို့ လွန်ခဲ့တဲ့ မေလအတွင်းမှာ ကျင်းပကြတဲ့ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ ပမာဏ ညီလာခံမှာလဲဘဲ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီဗမာပြည်ကြီးကို လုံးဝလွတ်လပ်ပြီးတော့ အချုပ်အချာ အာဏာနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ သမ္မတနိုင်ငံအဖြစ်နဲ့ တည်ထောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ် ခဲ့တယ်။ နောက်ပြီးတော့လဲဘဲ ဒီတိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်ကြီးမှာလဲ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် တင်သွင်းခဲ့ပြီးတော့ကာ ဒီအချုပ်အချာ အာဏာနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ သမ္မတ နိုင်ငံကို တည်ထောင်မယ် ဆိုပြီးတော့ကာ အဲဒီ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို တင်သွင်းလို့ ဆုံးဖြတ်လို့တောင်ပြီးပြီ။
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အဖွဲ့ချုပ်လုပ်တဲ့ အလုပ်ဟာ အင်မတန်ရှင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ တိုင်းပြည်ကို ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း လုံးဝလွတ်လပ်ရေးကို ကျွန်တော်တို့ရအောင် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်း လုံးဝ လွတ်လပ်ရေးကို ကျွန်တော်တို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ဒီလုံးဝ လွတ်လပ်ရေးကို ဆုံးဖြတ်ပြီတဲ့နောက် ကျွန်တော်တို့ ဒီတိုင်းပြည်ကို ကြေငြာ ထားတဲ့အတိုင်း တနှစ်အတွင်း လုံးဝလွတ်လပ်ရေး ရအောင် လုပ်မယ်ဆိုတာလဲ ကျွန်တော်တို့ လုပ်နေလျှက်ပါပဲ။ တနှစ်လဲဘဲ မပြည့်သေးပါဘူး။ တနှစ်စေ့လာတဲ့ အနေမျိုး ၊ သို့သော်လဲဘဲ စေ့တယ်။ ပြည့်တယ် ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးကတော့ အလျော့အပေါ့ နဲနဲပါးပါး ပါချင်ပါတယ်။ သို့သော်လဲဘဲ ဘယ်လိုသဘော ဖြစ်ဖြစ် အဲဒီဖြစ်တာတဲ့ အချိန်အခါမျိုးမှာ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွှတ်တော်က ဗမာပြည်ရဲ့ လွတ်လပ်ရေးကို ရအောင် မလုပ်နိုင်သေးဘူး။ ကျွန်တော်တိုကလဲဘဲ အဲဒီ အချိန်အခါ အထိ လွတ်လပ်ရေးကို အေးအေးချမ်းချမ်း ရနိုင်အောင် ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားမယ်။ အဲဒီလို ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်နေတယ်။ ဒီလိုလုပ်နေတဲ့ အတိုင်းးကျွန်တော်တို့ လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းဟာ အောင်မြင်သလား၊ မအောင်မြင်ဘူးလား ဆိုတာ အခုနေအခါ ဘယ်သူမှ မပြောနိုင်သေးဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုယင် အချိန်တွေ လိုပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေဟာ မပြီးသေးဘူး။ ပြီးလာတဲ့ တနေ့ ခင်ဗျားတို့ မြင်လာတဲ့ တနေ့မှာ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ငန်းတွေဟာ အေင်သလား၊ မအောင်ဘူးလား ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ မြင်နိုင်မှာဘဲ။
အဲဒီလို မြင်လာတဲ့အခါမှာ၊ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အဖွဲ့ချုပ်ဟာ ဘယ်လို အဖွဲ့ချုပ်မျိုးလဲ။ အလုပ်လုပ်တဲ့ နေရာမျိုးမှာ ဘယ်လိုထိရောက်အောင် လုပ်နိုင်သလဲ ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ မြင်လာမယ်။ အဲဒီတော့ အခုနေအခါမှာ ကျွန်တော်ဘာမှ သိပ်ပြီးတော့ ကြီးကြီး ကျယ်ကျယ်တွေ ပြောနေဖို့ မလိုပါဘူး။ အဲဒီတော့ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အဖွဲ့ချုပ်က ဘာမှ သွေးဖီပြီး တော့ လုပ်နေတာ မရှိပါဘူး။ ဒီလွတ်လပ်ရေး ရအောင်ဆိုပြီး လုပ်နေတာပဲ။ သို့သော်လဲဘဲ အဲဒီလို လွတ်လပ်ရေး ရအောင် ကျုပ်တို့က လုပ်တဲ့နေရာမှာ အလွယ်ဆုံး ၊ အကောင်းဆုံး၊အအေးဆုံးနည်းကို ရှာတယ်။ အဲဒီလိုရှာတာကို ကျုပ်တို့တို ဘာအပြစ်ပြောစရာ ခင်ဗျားတို့ရှိသလဲ။ အလွယ်ဆုံး ၊အကောင်းဆုံး၊အအေးဆုံး နည်းတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ လွတ်လပ်ရေး ရအောင်ရှာတဲ့ နေရာမယ် ဘယ်သူတွေက ဘာဖြစ်လို့ ကျုပ်တို့ကို အပြစ်တင်နေရသလဲ၊အဲဒီတော့ကာ အဲဒီလို လုပ်တဲ့ နေရာမယ် ဒါတွေကို ရှင်းပြနေတဲ့ အထံကနေပြီးတော့ ကျုပ်တို့ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အဖွဲ့ချုပ်က ဒိုမီန်ီယံဘဲ လက်ခံတော့မလိုလို ဘာလိုလိုအစရှိသည် အားဖြင့် တချို့ကနေပြီးတော့ ဟိုရေး၊ဒီရေး၊ ဟိုပြော၊ဒီပြော ပြောတယ်။
ကျုပ်တို့ ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်က အဲဒီလိုလူတွေ ပြောတာတွေကို ယုံချင်တယ်ဆိုယင် ခင်ဗျားတို့ ယုံနိုင်တယ် (လက်ခုတ်တီးသံနှင့်ဩဘာသံများ)။ အဲဒီတော့ ဒိုမီနီယံ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒိုမီနီယံ ပြောနေကြတဲ့ လူတွေကလဲ နားလည်လို့ ပြောနေကြတာ မဟုတ်ဘူး။ အမှန်စင်စစ်တော့ ကျွန်တော်တို့ ဗမာနိုင်ငံရေးမှာ ကျွန်တော်နဲနဲ (Brutal truth) ဆိုမှာပေါ့၊ တော်တော်ကလေး ကိုဘဲ ရက်ရက် စက်စက် မှန်တယ်။ သခင်နုကတော့ ကျွန်တော့်ကို ခဏခဏ ပြောတယ်။ ခင်ဗျား (painful truth)သိပ်မပြောပါနဲ့လို့။ (painful truth) ဆိုတာ ဘာလဲဆိုယင် မှန်တော့ မှန်တယ်။ သို့သော် မှန်လွန်းအားကြီးလို့ မခံနိုင်ဘူး။ အဲဒီလိုဖြစ်တယ်။ သို့ပေမဲ့ ဒီတခါလဲ ကျွန်တော် ပြောရအုံးမယ်။ ဘာပြေမလဲဆိုယင် ယခု ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးသမားတွေ လုပ်နေကြတယ်။ သတင်းစာဆရာတွေ လုပ်နေကြတယ်။ သူတို့ ရေးနေတာ သူတို့၊သူတို့ ပြောနေတာ သူတို့ နားမလည်တဲ့ သူတွေ အများကြီးဘဲ ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သိစေချင်တယ်။(လက်ခုတ်တီးသံ ဩဘာသံများ)။ခံချင်မှာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဘာပြုလို့လဲ ဆိုယင် နားမလည်ဘူး ပြောလိုက်တာကိုး၊ခံချင်မှာတော့ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ့။ သို့သော်လဲဘဲ (It is painful truth) အဲဒါ တခါတည်းကို သွေးထွက်အောင် မခံချင်လောက်အောင် မှန်တယ်၊မှန်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် ရဲရဲ ကြီး ပြောရဲတယ်။ (လက်ခုတ်တီးသံနှင့် ဩဘာသံများ)။
အဲဒီတော့ ကိုယ်ပြောနေတာ ကိုယ်ရေးနေတာ ကိုယ်လုပ်နေတာ ဘာမှန်းမသိတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊သတင်းစာ ဆရာတွေက တော်တော်ကလေး များတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်နေတော့ ကျွန်တော်လဲ နိုင်ငံရေး အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ စကားက အစ ကျွန်တော်တခါတည်း တိုင်းပြည်ကို နောင်အခွင်သင့်လို့ရှိယင် အပတ်စဉ် အပတ်စဉ်ဖြစ်စေ၊တခါတည်း ရက်ဆက် သဘောမျိုး ဖြစ်စေ တခါတည်း အဲဒီလို ရှင်းလင်းပြသွားချင်ပါသေးတယ်။ိ အဲဒီအခါကျယင် နိုင်ငံရေး ဆိုတာ ဘာလဲ၊ တော်လှန်ရေးဆိုတာ ဘာလဲ၊ နောက်ပြီးတော့ လွတ်လပ်ရေး ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဟိုဟာက ဘာလဲ၊ဒီဟာက ဘာလဲ၊အဲဒါတွေ ကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တယ်။ ခေါင်းဆေင်မှုဆိုတာ ဘာလဲ၊ အချောင်သမားဆိုတာ ဘာလဲ။ အဲဒါတွေ ကျွန်တော် ရှင်းပြချင်တယ်။ သို့ပေမယ့် ၀မ်းထဲမှာတော့ အများကြီးဘဲ၊ ပုံနေတာဘဲ၊ သို့သော်လဲဘဲ ကျွန်တော့်မှာ အချိန်က မရတော့ မရှင်းနိုင်အားဘူး။ အဲဒီတော့ သတင်းစာထဲ ရေးချင်တာရေး၊ တချို့ ပြောချင်တာပြော၊ ကြည့်နေရတာပဲ။ ဘာမှ မတက်နိုင်ဘူး။ ခင်ဗျားတို့ ကြားချင်တာ ကြးပြီး၊ ထင်ချင်တာ ထင်နေတာဘဲ ဆိုတာလဲ ကျွန်တော် သိပါတယ်။ (လက်ခုတ်တီးသံနှင့် ဩဘာသံများ)။
အဲဒီတော့ ခင်ဗျားတို့ သေသေချာချာ သတိထားကြည့်စေချင်တာက ဒီ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အဖွဲ့ချုပ်ဟာ ဘယ်လို ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အဖွဲ့ချုပ်လဲဆိုတာ ရာဇ၀င်နှင့် ပြန်ကြည့်စေချင်တယ်။ လူတွေကိုလဲ ရာဇ၀င်နှင့် ပြန်ကြည့်စေချင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဗမာပြည်မှာ ပေါ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့တွေ၊ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေ အားလုံး တယောက်စီ တယောက်စီ ခင်ဗျားတို့ စိတ်ကူးထဲမှာ စဉ်ပြီး၊မာတိကာ စဉ်ပြီး စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါ။ ဘယ်လို လူစားတွေလဲ၊ ဘယ်လို အဖွဲ့တွေလဲ ဆိုတာ။ အဲဒီအခါမှာ အဖြေထွက်လာမယ်။ ယခု အခါမှာ ကျွန်တော်တို့က အစိုးရ လုပ်နေတဲ့ အချိန်အခါမျိုး ဖြစ်တယ်။ သို့သော်လဲဘဲ ကျွန်တော်တို့က အစိုးရ လုပ်နေတဲ့ အချိန်အခါမျိုးမှာ ဆိုယင် အတိုက်အခံ ဆိုတာ ရှိစမြဲပါဘဲ။
ဘုရားလက်ထက်က ဘုရားကိုယ်တိုင် အတိုက်အခံနှင့် မကင်းလို့ရှိယင်၊ကျုပ်တို့လဲ မလွတ်ကင်းနိုင်ဘူး။ အဲဒီလို အတိုက်အခံနှင့်မကင်တဲ့အပြင် တပ်ပျပ်ဗိုလ်လုပ်ရတဲ့ အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်။ ဒီလို တပ်ပျပ်ဗိုလ်လုပ်ရတဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်နေတော့ ချွတ်ယွင်းချက်တွေ အမြောက်အမြား ရှိတယ်ဆိုတာ ကျုပ်တို့ ကိုယ်တိုင်သိတယ်။ ဘယ်အစိုးရမှလဲ ချွတ်ယွင်းချက် မရှိတဲ့ အစိုးရ မရှိဘူး။ သို့သော်လဲဘဲ တိုင်းပြည်ပေါ်မှာ စေတနာ ရှင်းရှင်း ထားပြီးတော့ တဆင့်ထက် တဆင့် ကျွန်တော်တို့ လုပ်လာတဲ့ လုပ်ငန်းဟာ တိုးတက်သလား မတိုးတက်ဘူးလား ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ ပြန်ကြည့်ပါ။ (ဩဘာသံများ) ။ ရက်မကြာခင်လောက် ဆိုယင် သခင်နုတို့လဲ ပြန်လာမယ်။ နောက်တော်တော်လေး ကြာလာယင် ကျွန်တော်တို့ဟာ တိုင်းပြည်ကို အတိအလင်း ကြေငြာနိုင်တဲ့ စကားမျိုး လုပ်လာနိုင်ဦးမယ်။ အဲဒီလို လုပ်လာတဲ့ အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ လွတ်လပ်ရေး လုပ်ငန်းမယ် ဘယ်အထိ ရောက်အောင် တစခန်း တက်လာပြီး ဘယ်အထိ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းမှာ ဘယ်လို တစခန်း တက်လာပြန်ပြီ အစရှိသည်အားဖြင့် အဲဒီလို အခွင့်အလမ်းတွေကို ခင်ဗျားတို့ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလို တိုင်းပြည် ပြန်လည် ထူထောင်ရေးမယ် လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းမှာလဲ တဆင့်တက်လာတာကို သော်၎င်း၊ အခု လွတ်လပ်ရေး လုပ်ငန်းနဲ့ တဆင့်တက်လာတာကို သော်၎င်း အဲဒီလို တိုးတက်လာတာကို ခင်ဗျားတို့ ရက်မကြာမီမှာ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလို မြင်ရရုံ ကဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဒီအစိုးရနှင့် အရင်က ရှိတဲ့ အစိုးရတွေနှင့် ယှဉ်ကြည့်လိုက်ယင် ကျုပ်ပြောရဲတယ်။ ယခု အစိုးရထဲမှာ လာဘ်စားတဲ့ လူတွေ မရှိပါဘူးဆိုတာ ကျုပ်ပြောရဲတယ်။ (ဩဘာသံများ)။
အရင်အစိုးရတွေတုန်းက ကျုပ် အတိအလင်း ပြောတယ်။ လာဘ်စားတဲ့ လူတွေရှိတယ်။ခင်ဗျားတို့ ဘာပြောဦးမလဲ။ အဲဒီလို လူတွေက ယခုနေ အခါမယ် တိုင်းပြည်ကို မိမိတို့ ပါတီ ပြန်အာဏာရအောင် ခြေထိုးကြတဲ့ ကိစ္စမှာ ယောင်ယောင် မှားမှား ဖြစ်တဲ့ လူတွေဟာ စေတနာ ပါသည် ဖြစ်စေ ၊မပါသည် ဖြစ်စေ တိုင်းပြည်သစ္စာဖောက်တဲ့ ကိစ္စမှာ ရန်သူ နံပါတ် (၁) တွေ ဖြစ်တယ်။(ဩဘာသံ) ။ အဲဒီ ရန်သူ နံပါတ် (၁) တွေကို ခင်ဗျားတို့ ထောက်ခံ ချင်တယ်ဆိုလျှင် ခင်ဗျားတို့ လည်ပင်း ခင်ဗျားတို့ ကြိုးတပ်ကြတာဘဲ (ဩဘာသံများ)။ ကျုပ်တို့ဟာ ဒီတိုင်းပြည်မှာ အစိုးရ ဖြစ်အောင် အတင်း အဓမ္မလုပ်လာလို့ အစိုးရဖြစ်တာ မဟုတ်ဘူး။ တိုင်းပြည်လူထုရဲ့ ထောက်ခံမှုနဲ့ ကျုပ်တို့ အစိုးရုဖြစ်နေတာ တိုင်းပြည်က မကြည်ညိုဘူးဆိုတာ ကျုပ်တို့ သိတဲ့ တနေ့မှာ ကျုပ်တို့လဲ မနေဘူး။ တွယ်မနေပါဘူး။ ထွက်မှာပါဘဲ။ သို့သော်လဲဘဲ တနှစ်လောက် ကျုပ်တို့ကို စောင့်ကြည့်တဲ့ အခါမှာ ကျုပ်တို့ဟာ ဘယ်လိုလူစားတွေလဲ။ ရာဇ၀င်မှာ အရေးခံမဲ့ လူစားမျိုးတွေလား။ ရာဇ၀င်မှာ အဆဲခံမဲ့ လူစားမျိုးတွေလား ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ ကိုယ်တိုင် သိပါလိမ့်မယ်။
ဒီတော့ကာ လွတ်လပ်ရေး ဆိုလို့ ခင်ဗျားတို့ကို ကျွန်တော် ပြောပြဦးမယ်။ လွတ်လပ်ရေး ဆိုတိုင်း ပဒေသာပင် မြေက မပေါက်နိုင်ဘူး ဆိုတာကို ခင်ဗျားတို့ကို ကျွန်တော်တို့ကို ရှင်းခဲ့ချင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုလို့ရှိယင် ခင်ဗျားတို့ စိတ်ထဲမှာ လွတ်လပ်ရေး ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိယင်၊စိတ်ကူးက ဘယ်လို စိတ်ကူးကြသလဲ ဆိုလို့ယင် ပဒေသာပင်ကြီး ချက်ချင်း နေ့ချင်း၊ညချင်းပေါက်လာကြတော့မလို့ ခင်ဗျားတို့ ထင်ကြတဲ့ လူတွေ များကြတယ်။တချို့ကလဲဘဲ ဟာ- လွတ်လပ်ရေးရပြီ ဆိုတော့ကာ ဟသာင်္နယ်ထဲမှာ ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်။ ဘာတွေ့ခဲ့သလဲ ဆိုယင် လမ်းပေါ်မှာ ဆေးလှန်းတယ်။ ဟာ လွတ်လပ်ရေး ရပြီကွ ဆိုပြီးတော့ လူတကာသွားတဲ့ လမ်းပေါ်မှာ ထွက်ပြီး ဆေးလှန်းတယ်။ အဲဒီတော့ လမ်းသွား လမ်းလာ လုပ်တဲ့ သူတွေက အတော်ဂွကျတယ်။ အဲတာဟာ လွတ်လပ်ရေး မဟုတ်ဘူး။ လွတ်လပ်ရေး ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ဘာလဲ။ လွတ်လပ်ရေး ဆိုတာဟာ ကိုယ်တဦး တယောက် ကောင်းစားဖို့ ဖြစ်စေ၊ တမျိုးလုံး ကောင်းစားဖို့ဖြစ်စေ လုပ်တဲ့ နေရာမှာ အခြားတဦး တယောက်ရဲ့ အကျိုးကို မထိခိုက်ဘဲနဲ့ အခြားလူတွေရဲ့ အကျိုးကို မထိခိုက်ဘဲနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကိုယ့်တိုးတက်မှု အတွက် လုပ်နိုင်တာဟာ လွတ်လပ်ရေးဘဲ။
ဥပမာ ခင်ဗျားစီးပွားရေး ဖြစ်ထွန်းအောင် လုပ်တဲ့နေရာမှာ အနှောင့်အရှက် မရှိစေရဘူး။ အခြားလူတွေရဲ့ အကျိုးကို မထိခိုက်လို့ရှိယင် အနှောက်အရှက် မရှိစေရဘူး။ တိုင်းပြည်တပြည်လုံးရဲ့ အကျိုးကို မထိခိုက်စေရဘူး။ အခြား လူတွေရဲ့ အကျိုးကို မထိခိုက်စေရဘူး။ ခင်ဗျား လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေရှိရမယ်။ သို့သော်လဲ အခြားနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးကို သွားနှောင့်ရှက်တဲ့ လွတ်လပ်ရေးဟာ လွတ်လပ်ရေးကို မဟုတ်ဘူး။အဲတာက ဘာလဲ ဆိုယင် (Licence) ခေါ်တယ်။ ဒါဟာ ရမ်းကားမှုသာ ဖြစ်တယ်။
ဒီတော့ လွတ်လပ်ရေး ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဟာ စည်းမဲ့ ကမ်းမဲ့ သဘောမျိုး မဟုတ်ဘူး။ စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ သဘောမျိုးသာ ဖြစ်တယ်။ စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ ရှိမှ သာလျှင် လွတ်လပ်ရေး ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲဒီတော့ လွတ်လပ်ရေး ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ ရတဲ့ အခါမှာလဲ နားလည်ရမှာက ငါတို့ တိုင်းပြည်ဟာ ပိုပြီး စည်းကမ်းရှိဖို့လိုတယ်။ ငါတို့ တိုင်းပြည်ဟာ လွတ်လပ်ရေး ရအောင် လဲဘဲ စည်းကမ်းရှိရှိနဲ့ လုပ်ရမယ်။ အဲဒီလို အားဖြင့် စည်းကမ်း သဘောတွေကို နားလည်ပြီး စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ အလုပ် လုပ်ကြမှ လွတ်လပ်ရေး ဆိုတာ တကယ်ရမယ်။
နောက်ပြီးတော့ လွတ်လပ်ရေး ရတဲ့ အခါမှာ လွတ်လပ်ရေး အခွင့်အရေးတွေရတယ်။ လွတ်လပ်ရေးရတဲ့အခါမှာ ခင်ဗျားတို့ အခွင့်အရေးတွေ ပိုရတာလဲ ရှိတယ်။ အခွင့်အရေး ပိုရသလိုဘဲ တာဝန်တွေလဲ ပိုလာလိမ့်မယ်။ ဘယ်လို တာဝန်တွေ ပိုလာမလဲ ဆိုလျှင် ဒီတိုင်းပြည်ကို အ င်္ဂလိပ်က အုပ်ချုပ်နေတုန်းက ဒီဗမာပြည် ကာကွယ်ဖို့ တာဝန်ဟာ အင်္ဂလိပ်ရဲ့ တာဝန်သာဖြစ်တယ်။ သို့သော်လဲ ဒီဗမာပြည်ကို ကျုပ်တို့ လွတ်လပ်ရေးရတဲ့ အခါမှာ ကျုပ်တို့ ဗမာတွေကသာလျှင် ဗမာပြည်ကို ကာကွယ်မဲ့ တာဝန်ဟာ အဓိက ဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ အရင်တုန်းကလို ခင်ဗျားတို့ အေးအေး ဆေးဆေး နေလို့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ ကျုပ်တို့ တိုင်းပြည် အစိုးရ လုပ်တဲ့ လူတွေ က တိုင်းပြည် ကာကွယ်ဖို့အတွက် ဗမာပြည်မှာ စစ်သားတွေ နည်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိယင် ဗမာတိုင်း ဗမာတိုင်း အရွယ်ရောက်တဲ့ လူမှန်သမျှ ကျန်းမာတဲ့ လူမှန်သမျှ စစ်မှု မထမ်းမနေရ ဆိုပြီး တော့ အတင်း ဥပဒေနဲပ စစ်ထဲကို ထည့်ရလိမ့်မယ်။ အဲဒါမျိုးတွေ လုပ်တန် လုပ်ရလိမ့်မယ်။ နှစ်နှစ်တန်သည် ၊သုံးနှစ်တန်သည် စစ်ထဲဝင်ရမယ်။ ၀င်ပြီးနောက် စစ်ဖြစ်တဲ့ အခါမှာ ၀င်တိုက်ရမယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ တိုက်ချင် တိုကချင်၊ မတိုက်ချင် မတိုက်ချင် ၀င်တိုက်ရမှာဘဲ။ အဲတာကလဲ တာဝန်ဘဲ။ ဒါဟာ လွတ်လပ်ရေးရတဲ့ အခါမှာ ဖြစ်ရမဲ့ တာဝန်မျိုးဘဲ။ လွတ်လပ်ရေးရတဲ့ အခါမှာ ဖြစ်ရမဲ့ တာဝန်တွေဘဲ။
အဲဒီအတိုင်းဘဲ ကျွန်တော်တို့ ဒီတိုင်းပြည်မှာ လွတ်လပ်တဲ့အခါမှာလဲ ယိုးဒယားပြည်လို ဖြစ်ချင်သလား။ တူရကီပြည်လို ဖြစ်ချင်သလား၊ အိုင်ယာလန်ပြည်လို ဖြစ်ချင်သလား။ ယူနိုက်တက်စတိတ် အမေရိကန်လို ဖြစ်ချင်သလား။ အင်္ဂလိပ်ပြည်လို ဖြစ်ချင်သလား။ ဆိုဗီယက် ယူနီယံ လို ဖြစ်ချင်သလား။ ဖြစ်ချင်တာတွေအပေါ်မှာ မှီပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ အလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့ ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။ မလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့တော့ မဖြစ်ဘူး။
အဲဒီတော့ ဘိလပ်မှာ အခု ဒီစစ်ကြီးပြီးတဲ့အခါမှာ အင်မတန်ဘဲ မွဲနေတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ သူတို့တိုင်းပြည်က ထွက်တဲ့ကုန်က သူ့တိုင်းပြည်ကို သွင်းတဲ့ကုန်ထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုတယ်။ ပိုတဲ့အတွက်လဲဘဲ သူတို့တိုင်းပြည်မှာ ၀င်ငွေတွေ တော်တော်များများ ရပြီးတော့ သူတို့တိုင်းသူ ပြည်သားတွေကို တော်တော်ကလေး ချောင်ချောင်ချိချိ ဖြစ်အောင် သူတို့ထားနိုင်တယ်။ သို့သော်လဲ ဒီစစ်ကြီးပြီးတဲ့နောက် အင်္ဂလိပ်အစိုးရတို့မှာဆိုရင် ဒီနိုင်ငံခြားမှာ သူတို့ရှိနေတဲ့ ငွေပင်ငွေရင်းစိုက်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းတွေဟာ အမေရိကန်ကို ရောင်းပစ်လိုက်ရတာလောက်ချဉ်းဘဲ ဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီး ကြွေးလဲဘဲ တော်တော်များများကို တင်တယ်။ ကုဋေ ၁,၅၀၀ လောက်ကို တင်တယ်။ ရွှေဒင်္ဂါး ကုဋေ သန်းပေါင်း ၁၅၀၀ လောက်တင်ထယ်ခင်ဗျာ။ အဲဒါမျိုးအပြင် နောက်ပြီးတော့ သူ့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေဟာလဲဘဲ အတော်ကလေးဆုံးသွားတယ်။ ဆုံးရုံတင်မ့ဘူး။ နိုင်ငံခြားကို ကုန်ကူးတဲ့နေရာမှာ ထွက်ကုန်က ၀င်ကုန်ထက်အများကြီး နည်းနေတယ်။ အဲဒီတော့ ကာ အခုဒီစစ်ကြီး ပြီးတဲ့အခါမှာ ရှးက နဂိုအနေကို အမြန်ဆုံး ပြန်ရအောင် ဆိုပြီးတော့ အမြန်ဆုံးပြန်ရအောင်ဆိုပေမယ့် တစ်နှစ်တည်းမနှင့် မရဘူး၊ နှစ်နှစ်တည်းနဲ့ မရဘူး၊ နှစ်နှစ်၊ သုံးနှစ်၊ ငါးနှစ်၊ ခြောက်နှစ်၊ ခုနစ်နှစ်၊ ရှစ်နှစ်၊ကိုးနှစ်ဆယ်နှစ် အဲဒီလိုသူတို့ လုပ်ယူရမယ်။
အဲဒီအထဲမှာ ရှင်နည်းရော အဂလူထွက်ဆိုတာမျိုးလို သူတို့ တိုင်းပြည်မှာ တလောတုန်းက ရာသီဥတု ဆိုးဝါးပြီးတော့ကာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းတွေကလဲ အကြီးအကျယ် ပျက်စီးသွားတယ်။ နောက် ကျောက်မီးသွေး လုပ်ငန်းတွေလဲဘဲ အတော်အကြီးအကျယ် ထိခိုက်သွားတယ်။ အဲဒီအကြောင်းတွေကြောင့် သူတို့ အတော့်ကိုဘဲ ကြီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ ထိခိုက်နေတော့ကာ နဂို အခြေ အနေကို ၄၊၅၊၁၉ နှစ် ဆိုသလိုနဲ့ အမြန်ဆုံး ပြန်ရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ သူတို့ ဘာကြိုးစားနေသလဲ။ အင်္ဂလိပ်ပြည်မှ ထွက်တဲ့ ပစ္စည်း၊ အင်္ဂလိပ်ပြည်မှ လုပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အင်္ဂလိပ်တွေ မ၀ယ်နိုင်ဘူး။ ဘာပြုလို့လဲ။ဥပမာ အ၀တ်အထည်ကို အင်္ဂလိပ်ပြည်က လုပ်တယ်။ အဲဒီတော့ လုပ်တဲ့ အ၀တ်အထည်ကို အင်္ဂလိပ်ပြည်က လုပ်ပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး တွေကို တနှစ်ကို နှစ်ထည် ၊သုံးထည် အစရှိသည်အားဖြင့် လိုသလောက်ထပ် ပိုပြီး မ၀တ်ရအောင်၊ ကူပွန်ဆိုတာတွေ ပေးပြီးတော့ ဆိုင်တွေမယ် ရောင်းတယ်။ အဲဒီ ကူပွန်ရမှ ၀ယ်နိုင်တယ်။ အဲဒီတော့ ဒီလိုဝယ်နိုင်တော့ကာ အဲဒီလို ပေးပြီးတော့ ရောင်းတဲ့၊ အ၀ယ်ခိုင်းတဲ့ ပိုတာတွေ မှန်သမျှကို ဘာလုပ်သလဲဆိုယင် နိုင်ငံခြားကို ထုတ်ပြီးရောင်းတယ်။ နိုင်ငံခြားက တခါ ဘိလပ်ကို သွင်းတဲ့ ပစ္စည်တွေကျတော့လဲဘဲ အရင်ကလို အတိုင်းမသွင်းပဲနဲ့ လျှော့လျှော့ ပေါ့ပေါ့ တင်သွင်းပြီးနောက် အဲဒီ နိုင်ငံခြားက သွင်းတဲ့ အချို့ကုန် ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ချွေချွေတာတာ အရင်ကထက် အများကြီး လျှော့ပေါ့ပြီး အသုံးခိုင်းတယ်။ သူတို့ဆီမှာ ဆိုယင် ရှေးက စားရတဲ့ ပေါင်မုန့် နဲ့ အခုစားရတဲ့ ပေါင်မုန့်နဲ့ ဆိုယင် အခုအခါမှာ အင်မတန်ကို လျှော့ပြီး စားရတဲ့ အချိန်အခါမျိုး စားရတယ်။ ဒီလို ချွေတာပြီး အခုနေအခါမယ် လုပ်မှ၊ နောက် လေး၊ငါးခြောက်နှစ်၊ခုနှစ်နှစ်၊ ဆယ်နှစ်အစရှိသဖြင့် အဲဒီလို ရှိလာတဲ့ အခါကျမှ အင်္ဂလိပ်ပြည်ဟာ အရင်နဂို အခြေအနေကို ပြန်ရောက်နိုင်မည့် အကြောင်းရှိတယ်။ အဲဒီလို မဟုတ်ဘဲနဲ့ နေမယ်ဆိုယင်တော့ သူတို့မရနိုင်ဘူး။
အဲဒီတော့ကာ ဒီလို တိုင်းပြည်ကျကျနန ဖြစ်အောင်၊ထူထောင်နိုင်အောင် ဆိုယင် အင်္ဂလိပ်တွေဟာလဲ လွတ်လပ်တဲ့ တိုင်းပြည် ဖြစ်ပင် ဖြစ်ငြားသော်လည်း အလုပ်လုပ်ရတဲ့ ဆိုတာကို ခင်ဗျားတို့ သိစေချင်တယ်။ အဲဒီအတိုင်းဘဲ ဆိုဗီယက် ယူနီယံဆိုတဲ့ တိုင်းပြည်ကြီးဟာ တော်လှန်ရေးတွေ ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် ၊ပဌမ ရှေးဦးစွာ စစ်အတောအတွင်းမှာတော့ ၀ါးကွန်မြူနစ်ဇင် (war communism) ဆိုတာ ဒီ အတောအတွင်းမှာ လုပ်တဲ့ ကွန်မြူနစ် ဆိုပြီးတော့ လုပ်တယ်။ အဲဒီ ပြီးတဲ့နောက် စစ်ပြီးတဲ့အခါမှာလ (New Economic policy) ခေါ်တဲ့ စီးပွာရေးစံနစ် သဘောမျိုးဘဲ လုပ်ရတယ်။ အဲဒီလို လုပ်ပြီးတဲ့ နောက်မှ တခါ ငါးနှစ် စီမံကိန်းတွေဆိုပြီးတော့ ငါးနှစ် စီမံကိန်းတွေ ဆိုဗီယက် ယူနီယံမှာ လုပ်ခဲ့တယ်။အဲဒီလို ငါးနှစ် စီမံကိန်းတွေ လုပ်စဉ် အခါတုန်းက ဒီတနိုင်ငံလုံးရဲ့ အခြေအနေအားလုံးကို ခြုံကြည့်ပြီးတော့ တတိုင်း တပြည်လုံးကောင်းဖို့၊အမြဲတမ်းကောင်းဖို့ကို ရှေ့ရှုကြည့်ပြီတော့ လုပ်ရတဲ့ အခါဖြစ်တဲ့အတွက် လူတွေဟာ စားချင်တိုင်း ပဌမ မစားရဘူး။ ၀တ်ချင်တိုင်း မ၀တ်ရဘူး။ နေချင်တိုင်း မနေရဘူး။ အဲဒီလို ဖြစ်ရတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ကို ပြန်လည် ထူထောင် ကြမယ်ဆိုလို့ ရှိယင်လဲ (National Planning) ခေါ်တဲ့ အဲဒီ စီမံကိန်းမျိုးတွေနဲ့ မလုပ်ဘဲနဲ့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ဟာ မကြီးပွားနိုင်ဘူး။ မထူထောင်နိုင်ဘူးဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သတိရှိစေချင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ပဒေသာပင်ဟာ မြေက ပေါက်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ပဒေသာပင် ပေါက်အောင်ဆိုယင်၊ကျွန်တော်တို့ အလုပ်လုပ်မှ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ နားလည်စေချင်တယ်။ အဲဒီတော့ လွတ်လပ်ရေးရပင် ရသော်ငြားလည်း၊ လွတ်လပ်ရေးရဲ့ တာဝန်တွေကို ကျွန်တော်တို့က မထမ်းဆောင်ချင်ဘူး ဆိုယင် ခင်ဗျားတို့ ရတဲ့ လွတ်လပ်ရေးဟာ ဒီကနေ့ ရပြီး မနက်ဖြန်ခါ တခြားလက် ပြန်ပါသွားမှာဘဲ ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သိစေချင်တယ်။
ဒီတော့ အဲဒီ လွတ်လပ်ရေးရတဲ့ အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ အခုတင်က စီမံကိန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ လုပ်တောင်မှ အနှစ် ၂၀ လောက် ကျွန်တော်တို့ စကားခပ်ရိုင်းရိုင်း ပြောရယင်၊ စကား ခပ်ရိုင်းရိုင်း ပြောရယင်ဆိုတာ စကား ခပ်ရိုင်းရိုင်း ပြောမှ လူတွေက မှတ်မိတယ်။ စကား ခပ်ရိုင်းရိုင်း ဆိုယင် အတော့ကို ပြဲအောင် ကြိုးစားနိုင်မှ၊ လုပ်နိုင်မှ အဲဒါအတော့ကို ကုန်းလုပ်နိုင်မှ၊ အနှစ် ၂၀ လောက်ရှိတဲ့ အခါမှာ တော်ကာကျမယ်။ အဲဒီလို မဟုတ်ဘဲ ခင်ဗျားတို့ အလုပ် အလုပ်မလုပ်ဘဲ နေမယ်ဆိုလို့ရှိယင် ယိုးဒယားပြည်ရဲ့ အဆင့်အတန်းတောင် မှီမှာ မဟုတ်ဘူး။ ယိုးဒယား ပြည်ဆိုလို့ရှိယင် လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံထဲမှာ ညံ့ညံ့ဘဲ၊ ညံ့ညံ့ပင်ဖြစ်ပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဗမာပြည်နဲ့ စာလိုက်ယင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ဗမာပြည် လွတ်လပ်ယင် လွတ်လပ်ချင်းဘဲ၊ယိုးဒယားပြည်က ကျွန်တော်တို့ ထက်တော့ သာတာဘဲ။ ဘယ်လိုသာမလဲဆိုယင် စစ်တပ်တွေ ဆိုလို့ရှိယင်လဲ ကောင်းကောင်းရှိတယ်။ရေတပ် တွေလဲ ရှိတယ်။ လေတပ်တွေလဲ ရှိတယ်။ အခြား စစ်တပ်တွေလဲ တော်တော်များများရှိတယ်။ အဲဒီလိုအားဖြင့် ယိုးဒယားက ရှိတာ ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ အဲဒီလို မရှိသေးပါဘူး။
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ တကယ်ဘဲ သုညကစပြီး အကုန်လုံး ပြန်ပြီးတော့ အုတ်မြစ်ချပြီး အလုပ်လုပ်ရမှာဆိုတော့ အခြားနိုင်ငံတွေက ခြေလှမ်း တလှမ်း လှမ်းယင်၊ တခြားလွတ်လပ်တဲ့ နိုင်ငံတွေက ခြေလှမ်းတလှမ်း လှမ်းယင် ကျွန်တော်တို့က ခြေလှမ်း ၄၊၅၊၁၀ လှမ်း လှမ်းလိုက်နိုင်မှ၊ အဲဒီလို လိုက်နိုင်တဲ့အခါကျမှ နောက် ၁၀ နှစ် ၊ အနှစ် ၂၀ တန်သည်အားဖြင့် အဲဒီလို တန်းတူ ညီမတူ ဖြစ်သွားမယ်။ တန်းတူ ညီတူ မဖြစ်သမျှ ကာလပတ်လုံး ဒီတိုင်းပြည်ကြီးဟာ လွတ်လပ်တယ် ဆိုပေမဲ့ ဟိုလူ့မြင်တဲ့အခါမှာ မျက်နှာချိုသွေးရ၊ ဒီလူ့မြင်တဲ့ အခါ မျက်နှာချို သွေးရနဲပ ဖာသယ်လို နိုင်ငံမျိုး ဖြစ်နေမှာဘဲ ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ အတိအလင်း နားလည်ထားစေချင်တယ် (ဩဘာသံများ)။ အားမှ မှရှိသေးတော့ အဲဒီလိုဘဲ ဖြစ်နေမှာဘဲ။ အဲဒီတော့ကာ အင်မတန်ကို ကျွန်တော်တို့ တခါထဲ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ လူတွေ စည်းစည်း ရုံးရုံးနဲ့ ရှိပါမှ ဖာသယ်သဘောမျိုး၊ နိုင်ငံမျိုး မဖြစ်ဘဲ နေမှာ။
အဲဒီတော့ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း ညီညွတ်ရေး၊ တိုင်းရင်းသား လူထု ညီညွတ်ရေး၊စားဖားသမားတွေ ညီညွတ်တာ ကျွန်တော် မလိုချင်ပါဘူး။ တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း ညီညွတ်ရေး၊တိုင်းသူပြည်သား လူထု ညီညွတ်ရေး။အဲဒီညီညွတ်ရေး နှစ်ခု မရှိသမျှ ကာလပတ်လုံး၊ဒီတိုင်းပြည်ဟာ လွတ်လပ်ပင် လွတ်လပ်သော်ငြားလဲ ဘယ်ပါတီ တက်တက်၊ ဘယ်အစိုးရ လုပ်လုပ်၊ ဖာသယ်တိုင်းပြည် ဖြစ်နေမှာဘဲလို့ ကျွန်တော် ပြောချင်တယ်။ အဲဒီတော့ကာ ဒီနှစ်ခုကို ခင်ဗျားတို့ မပျက်ပြားစေနဲ့။ ဘယ်သူကဘာလုပ်လုပ် မပျက်ပါစေနဲ့။ အဲဒါ အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်။
ဒီတော့ ယခုဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေမှာဆိုယင်၊လွတ်လပ်ရေးကိစ္စနဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြင်တာ ပြောရမယ်ဆိုယင်၊ လွတ်လပ်ရေးဟာ ရဖို့ အခြေအနေတော့ တော်တော်ကလေးများပါတယ် ဆိုတာ ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ သို့ပေမဲ့လဲ ကျွန်တော်တို့ ဗမာစကားလဲရှိတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားလဲရှိတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားကတော့ (Don't halloo till you are out of the wood) အရင်တခါလဲ ကျွန်တော်ပြောသွားပြီးပါပြီ။စစ်ပွဲကြီးအတွင်းက တောကြီးမျက်မဲအတွင်းက မထွက်မိခင် ငါတော့ ဘေးလွတ်ပြီလို့ မအော်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးဘဲ။ အဲဒီအတိုင်းဘဲ။ ကျွန်တော်က တခါ ခြင်္သေ့မင်း ဥပမာကို ပြောရမယ်ဆိုယင် ခြသေ့င်္မင်းများဟာ တောကောင်ကို လိုက်တဲ့ နေရာမှာ ကြီးတာငယ်တာ ပဓာနမထားဘဲနဲ့၊ ကြီးကြီးငယ်ငယ် လုံ့လစိုက်တဲ့နေရာမှာ အဲဒီအတိုင်းဘဲ လုံ့လစိုက်သွားတယ်။ အဲဒီလို ထုံးအတိုင်းဘဲ ကျွန်တော်တို့က ပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အထိ အောင်မြင်လာတဲ့ တိုင်အောင် ကျွန်တော်တို့က ကြိုးစားမှု ၊အားထုတ်မှုကို လျှော့လို့မဖြစ်ဘူး။လုံ့လ ၀ိရိယကိုလျှော့လို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဆထက်ထမ်ပိုးသာ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဖို့လိုတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဗမာတွေမှာ စောက်ကျင့်တခုရှိတယ်။ ဘာစောက်ကျင့် တခုရှိသလဲဆိုယင်၊ဒါကလဲဘဲ ကျွန်တော် တို့ ကျွန်ဖြစ်ခဲ့ကြရတဲ့အတွက် ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။။ဘာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော် ဂျပန်ခေတ်တုန်းက ပုသ်ိမ်ဖက်ကို သွားတဲ့အခါ လှေပြိုင်ပွဲတခုရှိတယ်။ လှေပြိုင်ပွဲလုပ်ခဲ့တယ်။လှေပြိုင်ပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာ ဘာဖြစ်သလဲဆိုတော့ လှေတွေပြိုင်လိုက်တာ နှစ်စင်းပြိုင်တဲ့အခါမှာ နိုင်တဲ့အစင်းက ပန်းတိုင်မရောက်သေးဘူး၊ရှေ့ကို နဲနဲရောက်တယ် ဆိုယင်ဘဲ တက်ထောင်တယ်။ ကြွားတယ်။ တခါရှုံးတဲ့နောက်က နေတဲ့လှေကလဲဘဲ ပန်းတိုင်မရောက်သေးဘူး. ကြိုးစားချင် ကြိုးစားနိုင်သေးတယ်။ မကြိုးစားချင်တော့ဘူး။ ရှုံးတော့မှာပါဘဲကွာဆိုပြီး ခြေပစ်လက်ပစ်နဲ့ တယ်မခတ်ချင်တော့ဘူး။ဒါဟာ ဘာလဲဆိုယင် တကယ့်တိုင်းပြည်ထူထောင်တဲ့နေရာမှာ လွတ်လပ်တဲ့ လူမျိုးနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ စ်ိတ်ဓါတ်မျိုး မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီစိတ်ဓါတ်မျိုးဟာ ကျွန်ဖြစ်မဲံ စိတ်ဓာတ်မျိုး၊ ကျွန်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုး၊ ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုး ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ကျုပ်တို့ဗမာတွေ ကျွန်ဖြစ်နေမှာဘဲ. လွတ်လပ်ရေးရယင်လဲ မြန်မြန် ပြန်ကျွန်ဖြစ်မှာပါဘဲ။ နောက်ဆုံးတနေ့ မရှုံးတဲ့ တိုင်အောင် ကျွန်မဖြစ်တဲ့တိုင်အောင် ခုနကလို ဖာသယ် လွတ်လပ်ရေး ဖြစ်နေမှာဘဲ။ ဘယ်လိုလဲဆိုယင် အကျင့်က အဲဒီလိုနဲနဲလေး နိုင်လာတယ်။ ရှေ့က သာလာတယ်ဆိုယင် တက်ထောင်ချင်တဲ့ အကျင့်ရှိတယ်။ လှေတစင်းဟာ အဲဒီလို ရှေ့ကသာလာလို့ တက်ထောင်မိတာနဲ့ ပွဲတပွဲမှာ ရှုံးကိုရှုံးသွားတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်တယ်။
ပြီးတော့ ဘောလုံးပွဲကိုကြည့်၊ ကျွန်တော်တို့ ဗမာတွေ ဘောလုံးပွဲမှာ ကန်ကြတဲ့ အခါမှာဆိုယင် ကိုယ်က ပဌမ စဂိုးသွင်းရတယ် ဆိုယင် အတော် အားတက်လာတယ်။ အားတက်လာတာနဲ့ ၊ကန်တာနဲ့၊ပြုတာနဲ့ နောက်တခါ အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့ အခါမှာ တော်တော်လေး ဂိုးလေးများလာတယ် ဆိုယင် လျှော့လျှော့ ပေါ့ပေါ့ ကန်ချင်လာတယ်။ ငါနိုင်မှာဘဲ ဆိုပြီး အဲဒါနဲ့နေပြီး တဖက်ကနေပြီး နောက်ဆုံး အပြီးသတ်မှာ ကပ်ပြီး ပြန်ပြီးတော့ ဂိုးသွင်းသွားလို့ သရေ ဖြစ်ဖြစ်၊ရှုံးတာဖြစ်ဖြစ်၊ဖြစ်သွားတာမျိုးလဲ ကျွန်တော်တို့ ဘောလုံးပွဲ ရာဇ၀င်မှာ ခင်ဗျားတို့ ပြန်စဉ်းစားယင်တော့ တွေ့မှာဘဲ။ ဒါတင် မကသေးဘူး ဒီရှုံးသွားတဲ့ လူကလဲ ဘောလုံးကန်လို့ရှိယင် ပဌမအပိုင်း နာရီဝက်မှာ ရှုံးသွားယင်တော့ တော်သေးရဲ့။ ကျန်သေးတဲ့ ဒုတိယ နာရီဝက်မှာ ကန်လို့ ၁၀ မိနစ်လောက်ကြာတော့ ကိုယ့်ဖက်က ဂိုးမသွင်းနိုင်ဘူးဆိုယင် အဲဒီအခါကျယင် လူကိုချတယ်။ ဒါ ကျွန်တော်တို့ ဗမာဘောလုံးကန်တဲ့ ဘောလုံးပွဲ အကျင့်ဘဲ။ အဲဒါ (sporting spirit )မရှိဘူး။ ဒါဘာလဲ ဆိ်ုလိှု့ရှိယင် ဗမာတွေ စိတ်ထဲမှာ ဗမာတွေဟာ စိတ်ဓါတ်ထက်တယ်။ ဘာညာနဲ့ တလွဲဆံပင်ကောင်းနေတယ် ဆိုတာနဲ့ အတူတူဘဲ။ ဒီစကားဟာ ဒီနေရာမှာ သုံးဖို့ဟာတွေဘဲ။ ဗမာတွေ စိတ်ဓါတ်က မဟုတ်တဲ့ နေရာမှာ သွားပြီးကောင်းနေတယ်။ တကယ့်နေရာတွေကျတော့ အသုံးမကျဘူး။ ဗမာပြည် လွတ်လပ်ရေးရအောင် ဆိုတာမျိုးမှာ အသုံးမချတက်ဘူး။ ဗမာပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်တဲ့နေရာမျိုးမှာ အသုံးမချတက်ဘူး။ ဗမာ ဗမာချင်း ချဖို့ လုပ်ချင်တယ်။ အဲဒါမျိုးတွေ လုပ်ချင်တယ်။ဒါမျိုးတွေ လုပ်ချင်လို့ ဘယ်တော့မှ အကျိုးမရှိဘူး။ ဒီတိုင်းပြည် ဘယ်တော့မှ ပြန်လည် မထူထောင်နိုင်ဘူး။ ဒီတိုင်းပြည် ဘယ်တော့မှ မလွတ်လပ်နိုင်ဘူး။ လွတ်လပ်ယင်လဲ ဘယ်တော့မှ ကျကျ နန လွတ်လပ်ရေး မဖြစ်ဘူး။
အဲဒီတော့ကာ ကျွန်တော်တို့ အဲဒီ စိတ်ဓါတ်မျိုးကို လုံးဝ ဖျောက်ပစ်ဖို့လိုတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘာအလုပ် ဘဲလုပ်လုပ် ၊နောက်ဆုံးတနေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ရှုံးမယ်ထင်တယ် ဖြစ်စေ၊နိုင်မယ်ထင်တယ် ဖြစ်စေ၊မလျှော့တမ်း ဇွဲနဲ့လုပ်သွားရတယ်။ စစ်တိုက်တဲ့ နေရာမှာလဲ အဲဒီ အတိုင်းသွားရမယ်။
အင်္ဂလိပ်တွေကိုကြည့်။ အင်္ဂလိပ်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ အပေါ်မှာ အုပ်ချူပ်နေလို့ ကျွန်တော်တို့ မုန်းပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်တွေမှာ ချီးမွမ်းစရာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ခုပြီးခဲ့တဲ့ စစ်ကြီးမှာ သူတို့ ဘယ်လောက် အကျဉ်းအကျပ် ရောက်သလဲ။အဲဒီအကျဉ်းအကျပ်ထဲက နေပြီးတော့ကာ တခါတည်းကို လွတ်မြောက်လာအောင် ဘယ်လောက် တခါတည်းကို အံကြိတ်ပြီးတော့၊ခါးတောင်းကျိုက်ပြီးတော့ ကြိုးစားလာသလဲ။ ဒီမူတွေကို ကြည့်ပါ အခုလဲဘဲ သူ့တိုင်းပြည်မှာ နေတာတွေကိုကြည့်။သူတို့တိုင်းပြည်လဲဘဲ အခုလို ကျပ်ကျပ်တည်းတည်းနေရတာ လူတွေ မညည်းဘူးလားဆိုတော့ ပုထုဇဉ်ဘ၀ ညည်းတော့ညည်းကြမှာပါဘဲ၊ညည်းကြတယ်၊ညည်းငြားသော်လဲဘဲ စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ ညည်းကြတယ်။ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ အလုပ်လုပ်ကြတယ်။ အဲဒီလို လုပ်နေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာတော့ ၊စည်းကမ်းကို ယခုအခါမှာ မှရှိဘဲ ဖြစ်နေတယ်။ စည်းကမ်းမရှိတော့ကာယခု နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ နေရာတွေမှာ ယခုအခါမှာ၊နယ်ချဲ့သမားသဘောကျမဲ့ အလုပ်မျိုးကို လုပ်နေတယ်။ ယခု ကျွန်တော် တိတိ လင်းလင်း ပြောထားစမ်းမယ်။ ဗမာပြည်မှာ လူထုညီညွတ်ရေး၊ တိုင်းရင်းသား ညီညွတ်ရေးတွေဟာ မပြိုကွဲဘဲနဲ့ ဘယ်သူမှ ဖောက်ထွင်းလို့ မရလို့ရှိယင်၊နောက်ပြီးတော့ကာ လက်ဝဲသမားဆိုတဲ့ လူငယ် နိုင်ငံရေးသမားတွေ ညီညွတ်သည်ထက် ညီညွတ်ယင် အဲဒီ အင်အားဟာ ကြီးကြီးသလောက် ခင်ဗျားတို့ရဲ့ လွတ်လပ်ရေးဟာ ပိုကောင်းလာမယ်။အဲဒီ အင်အားဟယ ငယ် ငယ်သလောက် ခင်ဗျားတို့ လွတ်လပ်ရေးဟာ ရတယ်ဆိုပေမဲ့ နည်းနေမယ်။ အခွင့်အရေး နည်းနေမယ်။ နောက်တခါ အဲဒီလို နေရာမှာ နိုင်ငံရေးသမားတချို့ ခြေထိုးတာကို ခင်ဗျားတို့ ယောင်မှားလို့ အင်မတန် ဖရိုဖရဲ ဖြစ်ကြယင်တော့ဖြင့်ယင် အဲဒါ ခင်ဗျားတို့ လွတ်လပ်ရေး ရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲဒါ အင်္ဂလိပ်က ပေးချင်တာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ အိန္ဒိယမှာဆိုယင် မယူမဖြစ်တဲ့ အခြေအနေမျိုးကို ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒါမျိုးတွေကိုလဲ သတိထားဖို့ရှိပါတယ်။
အဲဒါတွေကို အားလုံးကုန် သတိထားပြီး ၊ယခုတိုင်းပြည် ပြည်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် အနည်းငယ် ပြောပြချင်ပါသေးတယ်။ ဒီတိုင်းပြည ပြည်လည် ထူထေင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ကာ ယခု ကျွန်တော်တို့ရှိနေကြတဲ့ အခြေအနေမှာ အင်မတန်ဘဲ ဆိုးနေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဗမာပြည်ဟာ ဒီစစ်ကြီး ပြီးတဲ့နောက် ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေထဲမှာ မအေးနှစ်ခါနာဖြစ်တဲ့ ဗမာနိုင်ငံလို နိုင်ငံ မရှိသေးပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ဟာ ဂျပန်ဝင်လာတုန်းကလဲ စစ်မြေပြင်ဘဲ၊ အင်္ဂလိပ်ပြန်ဝင်လာတုန်းကလဲ စစ်မြေပြင်ဘဲ။ အဲဒီလို မိအေး နှစ်ခါနာဖြစ်တဲ့ ဗမာပြည်ဟာ အင်မတန်ဘဲ စီးပွားရေးမှာ ပျက်စီးတယ်။ အင်္ဂလန်ပြည်မှာလဲဘဲ စီးပွားရေး ပျက်စီးတယ်။ အင်္ဂလန်ပြည်မှာ စီးပွားရေး ပျက်စီးတော့ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေ ကတော့ စီမံကိန်းတွေ ဘာတွေနဲ့ သိပ်ပြီးတော့ ကျကျ နနတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်နဲ့စာယင် အင်မတန်ကို စံနစ်ပိုကောင်းတယ်။ အဲဒါတွေလုပ်ပြီး ၊ ချွေချွေတာတာနဲ့ နောင် ၄၊၅၊၁၉ နှစ်ကြာတဲ့အခါ ကျလို့ရှိယင် တကယ်ချောင်လည်လာအောင်ဆိုပြီး ကြိုးစားနေကြတယ်။ အဆင့်အတန်း မြင့်သထက် မြင့်အောင် ကြိုးစားနေကြတယ်။ ဆိုဗီယက်ယူနီယံမှာ ဆိုယင် စစ်ကြီးပြီးယင် ပြီးချင်း ငါးနှစ် စီမံကိန်းဆိုတာ လုပ်ပြီးတော့ကာ တခါထဲ ယခု ခြိုးခြံမှုတွေ လုပ်နေတယ်။ ဆိုဗီယက် ယူနီယံမှာ ရှေးကလို စားရ၊သောက်ရ၊နေရ၊ထိုင်ရတာ မှရှိတော့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုယင် စစ်ကြောင့် အင်မတန်ဘဲ ပျက်စီးတဲ့ အတွက်၊ပြန်ပြီးတော့ ချွေတာရတဲ့ အခြေအနေမျိုး ပြန်ရောက်လာတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်နေတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဗမာပြည်မှာတော့ ဒါ နိုင်ငံခြားထွက်ကြည့်မှာ ခင်ဗျားတို့သိမယ်။ စစ်ဖြစ်နေတုန်းက ကျွန်တော် ဂျပန်ပြည်ရောက်ဘူးတယ်။ ဂျပန်ပြည် ရောက်ဘူးလို့ ဂျပန်ပြည်က လူတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ဗမာပြည်လို ၀၀လင်လင်၊ပေါပေါများများ မစားရဘူး။ အ၀တ်အထည်တွေမှာလဲ ပေါပေါများများ မ၀တ်ရဘူး။ အစားစားတဲ့ နေရာမှာလဲ၊၀၀လင်လင် မစားရရဘူး။ နေရတဲ့ နေရာမှာတော့ သပ်သပ်ရပ်ရပ် နေရတယ်။ ဒါတော့ မှန်တယ်။ ဒါတော့ နှစ်ရှည်လများ လုပ်ထားတဲ့အတွက် သပ်သပ်ရပ်ရပ် နေရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်ကတော့ အဲသည်လို မဟုတ်ဘူး။ ပုံပေါလအော စားသောက် နေထိုင်ကြတာဘဲ။ ကျပ်ကျပ် တည်းတည်းဆိုတဲ့ အထဲကနေပြီးတော့ အဲဒီလိုနေကြတာဘဲ။ ဟိုတုန်းက ဂျပန်ပြည်ဟာ စံနစ်မကောင်းလို့ ဒီလို ကျပ်တည်းနေရတယ် ထင်တယ်လို့ ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာ အောက်မေ့နေတယ်။ အခု ဒီစစ်ကြီးပြီးတော့ ကျွန်တော် လိုက်ကြည့်တယ်။ စာထဲမှာလဲ ဖတ်ရတယ်။ကိုယ်တိုင်လဲ မြင်ရတဲ့ နိုင်ငံတွေလဲရှိတယ်။ အိန္ဒိယပြည်ကို သွားကြည့်ပါ။ ဥပမာ ဟော်တယ်တွေ သွားယင် ကိုယ့်မိတ်ဆွေတွေ ခေါ်ပြီး ကျွေးချင်တိုင်း မကျွေးနိုင်ဘူး။ တခါကို ၂၄ ယောက်ထက် ပိုပြီး မကျွေးနိုင်ဘူး။ ပေါင်မုံ့မရဘူး၊အာလူးတခုတည်းရတယ်။ ထမင်းအလျှင်းမရဘူး။ နောက်ပြီးတော့ တခါတည်းဟင်းလဲ တမယ်ထက်မပိုရ။ ကျွန်တော်တို့ ဆန်းကဖေးတို့ သွားစားတဲ့ လူတွေက ဟင်းတမယ်မကဘူး။ နှစ်မယ်မကဘူး၊သုံးမယ်မကဘူး၊လေးမယ်မကဘူး၊ စားချင်သလောက်စား၊ ဘာအကန့်အသက်မှမရှိဘူး။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ ဖြစ်နေတယ်။ အင်္ဂလန်ပြည်မှာ အဲဒါမရဘူး။ ဆန်မရဘူး။ ပေါင်မုန့်ဆိုရင် အရင်ကထက် လျှော့ရတယ်။ တခြားတိင်းပြည်တွေမှာ အဲဒီလို ချွေချွေတာတာ ကြိုးပမ်းပြီးတော့ အခုနေအခါမယ် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကြေတယ်။ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်က ကျပ်ကျပ်တည်းတည်းနေရတဲ့ အထဲက ဒီလိုပေါလအော သုံးကြတုန်း စွဲကြတုန်းဘဲ။
အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ဗမာတွေက ဆီမရှိ မစားနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ ဆီမရှိမစားနိုင်တာကတော့မှန်တယ်။ သို့သော် အဲဒီဆီတွေဟာ ဘာအတွက် သုံးနေကြတာလဲ။ ပုံပေါလအော သုံးသလား၊ မသုံးဘူးလား၊ တခြားတိုင်းပြည်တွေ သွားကြည့်ပါ။ ဆီကိုဒီလို ပုံပေါလအော သုံးနိုင်သလား၊ မသုံးနိုင်ဘူးလား၊ ခင်ဗျားတို့ဆီတွေကို ပုံပေါလအော သုံးနေတာ ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာ ဘာမှ အရေးမကြီးဘူးလို့ ထင်တယ်။ အဲဒီလို ပုံပေါလအော သုံးတဲ့အတွက် ကုလားပြည်ကနေပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ကြောင့် ခင်ဗျားတို့ဈေးကြီးတယ်။ ကြီးတယ်ဆိုတာ အကြောင်းပြချက်မှာ ခင်ဗျားတို့ ပုံပေါလအောသုံးနေလို့ ဒီဆီတွေကို တခြားနိုင်ငံက သွင်းနေရတဲ့အတွက်၊ အပိုသွင်းနေရတဲ့အတွက် ဈေးကြီးတယ်။ ကြီးတယ်ဆိုတာ အကြောင်းပြချက်မှာ ခင်ဗျားတို့ ပုံပေါလအောသုံးနေလို့ ဒီဆီတွေကို တခြားနိုင်ငံက သွင်းနေရတဲ့အတွက်၊ အပိုသွင်းနေရတဲ့အတွက် ဈေးကြီးတဲ့ နေရာမှာ အကြောင်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ တစ်ခု၊ အကြောင်းတစ်ရပ်ကိုတော့ ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ ငရုတ်၊ ကြက်သွန်ကြည့်။ ဗမာပြည်မှ ငရုတ်၊ ကြက်သွန်က ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် စိုက်ယင် မရင်နိုင်ဘူးလား။ ကျွန်တော်တို့ဆိုရင် ကျွန်တော့်အိမ်ဘေးမှာ ကျွန်တော်စိုက်တားတယ်။ အဲဒီ ကိုယ့်ဖာသာ ကိုယ်အိမ်ရာကွက်လပ် ရှိတဲ့လူတွေက၊ စိုက်ကြပါလား။ မစိုက်ကြဘူး။ ဈေးမှာ ကိုယ်တော်မြတ်တွေက ၀ယ်စားချင်ကြတယ်။ ဈေးမှာ ၀ယ်စားတော့ အဲဒီငရုတ်၊ ကြက်သွန်တွေက ဘယ်ကလာတယ်မှတ်သလဲ။ အိန္ဒိယပြည်က လာတယ်။ အိန္ဒိယ ပြည်ကလာတော့ ခင်ဗျားတို့ အိန္ဒိယပြည်ကို ခင်ဗျားတို့ ပိုက်ဆံပေးနေရတယ်။ အဲဒီလိုပေးနေရတဲ့အတွက် ဒီတိုင်းပြည်မှာ ရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းကို တခြားနိုင်ငံက ၀ယ်နေရတဲ့အတွက် ခင်ဗျားတိုပမှာ အခုဈေးကြီးတယ်။ ကြီးတယ်ဆိုတာ ဒါတွေဖြစ်တာဘဲ။ အကြောင်းတစ်ရပ်က ဆန်စားတဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ ဆန်စားတဲ့အနေနဲ့ ဒီအဟာရဓာတ်ကျမ်းတွေကို နားလည်တဲ့ လူတွေနဲ့ သေသေချာချာ ကြည့်မယ်ဆိုရင်၊ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ စားရတဲ့ အဟာရ အကုန်ပျမ်းမျှခြင်း တွက်ကြည့်မည်ဆိုရင် တခြားနိုင်ငံတွေထက် ပိုနေတယ်။ ပိုနေတော့ အခုကျွန်တော်တို့ ပြည်မှာ ဆန်ကတော့ လုံလောက်တယ်။ လုံလောက်ရုံတင်မကဘူး။ ပိုနေတယ်။ နိုင်ငံခြား တင်ရတယ်။ တင်ရောင်းရတယ်။ နိုင်ငံခြား တင်ရောင်းရပေမယ့် ကျွန်တောတ်ို့ စစ်မဖြစ်ခင်ကလောက် မပိုဘူး။ ပိုပို လျှံလျှံ မရှိဘူး။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ ကုန်တွေ စားတာကလဲ ရှေးကထက် လျှော့လဲမစားဘူး။ အရင်က လိုဘဲ ပုံပေါလအော စားတုန်းဘဲ၊ အပိုတွေ အများကြီးရှိတုန်းပဲ။
အဲဒီတော့ကော ယခုဖြစ်နေတာက စစ်မဖြစ်ခင်ကလောက် ဆန်မထွက်ဘူး။ ဆန်မထွက်တဲ့အထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ လျှော့စားကြသလားဆိုတော့ လျှော့မစားဘဲ ပုံပေါလအောင် စားနေကြတုန်းဘဲ။ အဲဒီအထဲမှာ ဆန်လှူတဲ့အတွက် ငွေတစ်ကုဋေကျော်ဖိုးလဲ ဆုံးသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်က ၀င်ကုန်နဲ့ ထွက်ကုန်မှာ အရင်စစ်မဖြစ်ခင်တုန်းက များတယ်။ အဲဒီများတဲ့ နေရာမှာလဲ ဆန်ကုန်ကူးတဲ့အတွက် အမြတ်အများဆုံးရတယ်။ ယခု ဆန်ကိုသာလျှင် ကျွန်တော်တို့ အများဆုံး အားကိုးရတယ်။ အဲဒီလို ဗမာတွေရဲ့  အသက်မသေခင်ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စမှာ စစ်ပြီးတော့ ပျက်စီးနေတဲ့အတွက် နွားတွေလုသွား၊ နောက်ပြီးတော့ သူခိုး ဓားပြဟောင်းတွေ သောင်းကျန်းမှုတွေကြောင့် လယ်ယာတွေ ကောင်းကောင်း မလုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်၊ ရှေးကလဲ မထွက်ဘူး။ ရှေးကလဲ မလုပ်နိုင်ဘူး။ အဲဒီမထဲမှာ ခင်ဗျားတို့ ပုံပေါလအော စားတုန်းဘဲ။ အဲဒီအထဲမှာ ဆန်လုတဲ့လူက လုကြတယ်။ ငွေတစ်ကုဋေကျော်ဖိုး ဆုံးသွားတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်တော့ကာ ဒီလိုဖြစ်နေတာတွေ ခင်ဗျားတို့ ကျပ်တယ်၊ ကျပ်တယ်ဆိုတာ၊ ဒါဘာအံ့သြစရာ ရှိသလဲ၊ ကျပ်မှာဘဲလို့ ကျွန်တော်တို့က ပြောချင်တယ်။
အဲဒီတော့ ယခုတိုင်းပြည်မှာ မငြိမ်အသက်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စ ဆူဆူပူပူ ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေဟာ တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးရှိသလာ။ အကျိုးမရှိဘူးလား ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ ထပ်မစဉ်းစားကြည့်။ ခင်ဗျားတို့ အကျိုးရှိတယ်၊ မရှိဘူးဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အဖွဲ့ချုပ်က တစ်ခါတလေ အပြောအဆိုမှားတာရှိရင် ရှိမယ်။ သို့သော်လဲဘဲ စေတနာကတော့ သန့်ရှင်းလျက်ပါဘဲ။ ဒါကျွန်တော်သေသေချာချာ ၀န်ခံရဲပါတယ်။ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ ဖွဲ့က ပုဂိုလ်တစ်ဦး တစ်ယောက်တည်းက ဖောက်ပြန်သွားတဲ့လူရှိချင် ရှိမယ်။ သို့သော်လည်း အဖွဲ့အနေအားဖြင့် ဘယ်တော့မှ မဖောက်ပြန်ဘူးဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သိစေချင်တယ်။ အဲဒီအတိုင်းဘဲ မဖောက်ပြန်တဲ့ သန့်ရှင်းတဲ့စေတနာနဲ့ ခြေလှမ်းမှန်မှန်နဲ့ နေပြီးဗမာပြည် လွတ်လပ်ရေးရအောင်ဆိုပြီး အကောင်အထည်ဖော်အောင် တစ်စတစ်စ ရုပ်လုံးလဲ ကျွန်တော်တို့ ပေါ်ပေါ်လာခဲ့ပြီ။ နောက်ရက်များမကြာမှီမှာဆိုရင် တစ်ဆင့်တက်ပြီး ခင်ဗျားတို့ အဲဒီ ရုပ်လုံးပေါ်လာတာကို မြင်ရမှာဘဲ။
တိုင်းပြည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းမှာလဲဘဲ အဲဒီလိုဘဲ တစ်ဆင့်တက်ပြီး ရုပ်လုံးပေါ်လာတာ မြင်ရအုံးမှာဘဲ။ အဲဒီလိုပေါ်လာပြီးတော့ တစ်ဆင့်ထက်တစ်ဆင့် လုပ်နေရာမှာ အကောင်းဆုံး၊ အလွယ်ဆုံး၊ အအေးဆုံးဆိုတဲ့နည်းကို ကျွန်တော်တို့က ပထမဦးစွာ ကျွန်တော်တို့ရှာပြီး လုပ်မှာဘဲ။ သို့သော်လဲပဲ အဲဒီလိုလုပ်လို့ မရဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ရှေးကလဲပြောလာခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။ "ခင်ဗျားတို့ပြန်ပြီး စဉ်းစားကြည့်။ အေးအေးနဲ့ မရရင်ရနိုင်တဲ့နည်းနဲ့ လုပ်ရမှာဘဲ။ ဒီတော့ တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော်ကို အချုပ်အချာအာဏာနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ လွှတ်တော် မဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တော်တို့ အဆီးအတား အာဏာလွှဲပြောင်းယူနိုင်အောင် ကျွန်တော်တို့ ပထမရှေးဦးစွာ ဒီသဘောကို ထားခြင်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်အခါရောကလို့ အကြည်အသာဆိုတဲ့ ကိစ္စမျိုး မဖြစ်လို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့က အတင်းလုပ်မှာဘဲ ဆိုတာတော့ ဒါပြောထားပြီးသား။ ဘာမှ ကျွန်တော် ထပ်ပြောနေစရာ မလိုပါဘူး။
ဒီတော့ အတင်းလုပ်တဲ့အခါမှာလဲ ခင်ဗျားတို့ အဆင်သင့် ရှိနေရမယ်။ ဆယ်ရေး တစ်ရေး၊ ကိုးရေး တစ်ရာ ရှိနေရမယ်။ ယခုအခါမှာလဲဘဲ ကိစ္စမပြီးသေးတော့ ကျွန်တော်တို့ သိပ်အားမလျှော့ရသေးဘူး။ ကျွန်တော် အရင်တစ်ခါ ပြောခဲ့သလိုဘဲ နိုင်ငံရေးဖက်က အေးနေပြီးတော့ကာ၊ မဟုတ်တဲ့နေရာမှာ ဆူတဲ့ပူတဲ့ဖက်က ပိုလာသလို ဖြစ်နေပါတယ်လို့ ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဲဒီတော့ကာ အဲဒီလို မဟုတ်တဲ့နေရာမှာ ဆူပူသောင်းကျန်းမှုတွေကို ဗမာပြည်ချစ်တဲ့ လူတွေမှန်သမျှ ၀ိုင်းဝန်းကူညီနှိမ်နှင်းဖို့ လိုတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ အားပေးဖို့ မလိုဘူး။ သို့သော်လည်းဘဲ ဗမာပြည်ရဲ့  လွတ်လပ်ရေးကို ထူထောင်ရေး၊ ဗမာပြည်တိုင်းသူ ပြည်သား ညီညွတ်ရေး၊ လူထုရဲ့ ညီညွတ်ရေး ထက်ထမ်းပိုးတိုးပြီး လုပ်ကြဖို့လိုတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ အဖွဲ့ချုပ်ကလဲ ဒီနေရာမှာဆိုရင် လုပ်လာတဲ့နေရာမှာ လိုသေးတယ်။ ကျွန်တော်လဲ သိပ်မကျေနပ်သေးဘူး။ အဲဒီတော့ကာ ဒါတွေအားလုံ အလုပ်လုပ်ကြဖို့လိုတယ်။ အဲဒီလို လုပ်နိုင်ကြမှသာလျှင် လွတ်လပ်ရေးဆိုတာလဲဘဲ ကျွန်တော်တို့ ရှေ့ ဆက်ပြီးတော့ကာ အားလုံး နင်းကန်ပြီးတော့ အလုပ်လုပ်နိုင်မှ အနှစ်၂၀ လောက်ကြာရင် တန်ကာကျမယ်။
အနှစ် ၂၀ လောက်ကြာရင် တန်ကာကြမယ်ဆိုတာက ကျွန်တော် နည်းနည်း ထပ်ရှင်းပြချင်သေးတယ်။ ဥပမာနဲ့ ပြောခဲ့ချင်တယ်။ ဥပမာ ပညာရေး ကြည့်မယ်။ ပညာရေးမယ် ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မယ် အရင်စစ်မဖြစ်ခင် တုန်းကထက် အင်မတန်အောက်ကျ နောက်ကျ ဖြစ်နေတယ်။ အင်မတန် အောက်ကျ နောက်ကျ ဖြစ်နေတော့ကာ အခမဲ့ မူလတန်းပညာ မသင်မနေရ ဥပဒေ လုပ်ပေးပါလို့ ပြောတယ်။ ဥပဒေသာလုပ်ပေမဲ့၊ ဘယ်လောက်ကြိုးစား၊ ဘယ်လောက်အလုပ်လုပ်မှ၊ ဘယ်လောက်ကြာမှ အဲဒီအခမဲ့ မူလတန်း မသင်မနေရ ပညာဆိုတာ ဗမာပြည်တစ်ပြည်လုံး၊ ရွာတိုင်း၊ မြို့ တိုင်းမှာဖြစ်မလဲဆိုတာက အနှစ် ၂၀ ကြာလောက်မှ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ယခုရှိတဲ့ ဆရာတွေက အင်မတန်နည်းနေတယ်။ အဲဒီကျောင်းတွေမှာ သုံးမဲ့ပစ္စည်းကိရိယာ တန်ဆာပလာ၊ စာအုပ်ခဲတံ၊ ကျောက်သင်ပုန်း၊ ဘီဒိုအကုန်လုံးရှိရမယ်။ ဒါတွေလဲ စုံစုံလင်လင် ရှိရမယ်။ အဲဒီဟာတွေအတွက် ကုနမာ့်ငွေတွေဟာ ဘယ်လောက်ကုနမလဲဆိုရင်၊ ကုဋေပေါင်းအများကြိး ချီပြီးတော့ကုန်မယ်။ အနှစ် ၂၀ လောက် ကျွန်တော်တို့ ကုန်လုပ်ပါမှ အနှစ် ၂၀ လောက်ရှိမှ ခင်ဗျားတို့ ဗမာပြည်တစ်ပြည်လုံး အခမဲ့ မူလတန်း မသင်မနေရ ပညာဆိုတာ တစ်တိုင်းတစ်ပြည်လုံး ရွာတိုင်း၊ မြို့ တိုင်းမှာ ဖြစ်မယ်။
နောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ကာကွယ်ရေးဖက်ကြည့်၊ စစ်တပ်တွေ အခု ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ စစ်တပ်ဘာရှိသလဲ။ ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ စစ်တပ် ဗမာပြည်မှာ ဆူတာပူတာ နှိမ်ဖို့တော့ လုံလောက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ အဲဒီ ဆူတာပူတာရှိတဲ့အတွက် စစ်တပ်ရော။ ပုလိပ်တပ်ရော ခါတိုင်းထက် နှစ်ဆ အခုပိုထားနေရတယ်။ အဲဒီလို နျစ်ဆပိုထားရတဲ့အတွက် နှစ်ဆ ပိုစရိတ်ကုန်တယ်။ နှစ်ဆပို စရိတ်ကုန်တယ်ဆိုတာ ဘယ်သူဆီကလဲ၊ ခင်ဗျား တို့ ပေးတဲ့အခွန်တွေဆီက နှစ်ဆပိုစရိတ်ကုန်တယ်။ အဲဒီတော့ ခင်ဗျားဆို့မှာ အခုပြန်ဈေးကြီးတယ်။ ဈေးတွေကြီးတယ်။ ကြီးတယ်ဆိုတာ ဒီလိုအကြောင်းတွေဘဲ။ တိုင်းပြည် ကာကွယ်ဖို့ကိစ္စမှာ ကျွန်တော်တို့ စစ်တပ်တွေက မလုံလောက်သေးဘူး။ ကုန်းတပ်ဆိုတဲ့ ကုန်းတပ် စစ်တပ်ကလဲ ဘာမှ မဖြစ်လောက်သေးဘူး။ သံချပ်ကာ ကားတပ်ဆိုတာတွေ ရှိသေးဘူး။ ဒီတပ်မျိုးဟာ အခုလိုခေတ်မှာဖြစ်တဲ့ စစ်ကြီးမျိုးမှာဆိုရင် တော်တော်တန်တန် ကြီးမားတဲ့ ရန်သူနဲ့ အင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ လက်နက်ကောင်းကောင်းနဲ့ တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုရင် နာရီပိုင်းအတွင်း ပြုတ်မယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့မှာ ရှိတဲ့ရေတပ်ဆိုတာက ဟန်ပြရေတပ်ဘဲ ရှိသေးတယ်။ တကယ့်တကယ် ဘာမှတိင်းပြည်ကို တကယ်မကာကွယ်နိုင်သေးဘူး။ လေတပ်ဆိုတာ အခုမှ စတုန်းရှိသေးတယ်။ အဲဒီတော့ကာေ လတပ်ကိုဘဲ ကျွန်တော်စဉ်းစားပြမယ်။ တခြားဟာတွေ မစသ်းစားနဲ့။ လေတပ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီတိုင်းပြည်လို လေတပ်မျိုးဟာ အဖျင်းဆုံး လေယာဉ်ပျံ ၅၀၀ လောက်ရှေ့ တန်း လေယာဉ်ပျံခေါ်ပါတယ်။ Firt line Plane အဖျင်းဆုံးစစ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်း လေယာဉ်ပျံ ၅၀၀ လောက်ရှိမှ၊ ဒါတောင်မှ လုံလောက်တယ်လို့ မခေါ်နိုင်သေးဘူး။ သို့သော်လဲ တူတူတန်တန်ကလေး တိုက်နိုင်တယ်လို့ မခေါ်နိုင်သေးဘူး။ သို့သော်လဲ တူတူတန်တန်ကလေး တိုက်နိုင်တယ်။ လေယာဉ်ပျံတစ်စင်းတစ်စင်း ဘယ်လောက်ကျတယ်၊ ငါးသိန်း၊ တစ်သန်းစသည်ဖြင့် ကျတယ်။ အဲဒီတော့ လေယာဉ်ပျံအစင်း ၅၀၀ ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ တွက်ကြည့်ပါတော့။ ကုဋေ ၅၀ ကုန်မယ်။ ကုဋေ ၅၀ ကုန်ပြီး၊ အဲဒီလေယာဉ်ပျံတွေ ၅၀၀ က ရှေ့ မှာတိုက်တဲ့အခါ နောက်မှာက လေယာဉ်ပျံတစ်စင်းကို သုံး၊ လေးစင်း အရံထားရမယ်။ အဲဒီနောက်မှာက အဖျင်းဆုံးလေယာဉ်ပျံ ၅၀၀ ထပ်ဖြည့်မှဖြစ်မယ်။
အဲဒီဟာ ကုဋေ၅၀၊ ကုဋေ ၁၀၀ သွားရော၊ အဲဒီမှာ ပျက်တဲ့လေယာဉ်ပျံတွေကို ပြင်ဖို့ အလုပ်ရုံတွေ၊ ဘာတွေ၊ ညာတွေ ရှိရမယ်။ စက်ကိရိယာ တန်ဆာပလာ နားလည်တဲ့လူတွေ ရှိရမယ်။ အဲဒီလို လုပ်ပေးရမဲ့ လူတွေရှိရမယ်။ အဲဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာ။ ရှောက်ပြီး တွက်လိုက်မယ် ဆိုလို့ရှိရင် အမြောက်အမြားကို ကုန်မယ်။ ကုဋေပေါင်း အများကြီး ချီကုန်မယ်။ ကျွန်တော်တို့င်းပြည်က တစ်နှစ် တစ်နှစ် တစ်နှစ်ကို ရမဲ့ဝင်ငွေက တိုင်းပြည်ဆီက ရတဲ့အခွန်ငွေက ဘယ်လောက် ရမလဲ။ စစ်မဖြစ်ခင်က အလွန်ဆုံး ကုဋေ၂၀ပဲ ရတယ်။ အခီုစစ်ပြီးတာနဲ့ ကုဋေ ၂၂ ကုဋေရတယ်။ နောင်ကို ကျွန်တော်တို့က ဖျစ်ဖျစ်ညှစ်ညှစ်ရအောင် အမျိုးမျိုး စီမံကိန်းတွေနဲ့  လုပ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ နှစ်စဉ်နှစ်စဉ်ရဖို့ ကုဋေ၃၀ ဆိုတာ လွန်ရော ကျွံရောဘဲ။
ဒါဟာ အင်မတန် ပိုပိုကြိုကြို တွက်ထားတာဘဲ။ ကျွန်တော်တို့ စီမံကိန်းတွေလုပ်တဲ့ အခါမှာ အမြတ်အစွန်ရမယ်ဆိုတာက ချက်ချင်းရမချင်မှရမယ်။ အဲဒီတော့ကာ အဲဒီလို ဒီလောက်တိုင်းပြည်ရဲ့ ဝင်ငွေကျတော့ နည်းနေပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ကုန်ရမဲ့ ဟာတွေကတော့ လေယာဉ်ပျံတပ်ဘဲ ကြည့်မယ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကုဋေ အဖျင်းဆုံး ၁၅၀-၂၀၀ လောက်ကျမဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေတယ်။ အကုန်လုံးခြုံပြီး ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ဟာ တကယ့်တကယ်တော့ စစ်တိုက်တဲ့ အချိန်မျိုးမှာ လူတစ်သန်း စစ်တပ်အင်အားရှိမှ ကောင်းမယ်ဆိုတော့၊ အဲဒီတော့ အခုကျွန်တော်တို့ ရှိနေတဲ့ စစ်တပ်တွေဟာ အခုနှစ်သောင်းလောင်ဘဲရှိတယ်။ နှစ်သောင်းလောက်ရှိတဲ့ စစ်ပတ်ကို နှစ်သောင်းလောက်ဆိုတာ ကျွန်တော် Army တင်ပြောတာ၊ Navy တို့၊ Air Force တို့ မပါသေးဘူး၊ အဲဒီတော့ နှစ်သောင်းလော်ကရှိတဲ့၊ အဲဒီ နှစ်သောင်းလောက်ဆိုတဲ့ စစ်တပ်တောင်မှ ငွေဘယ်လောက် ကုန်သလဲဆိုရင် ရှိစ်ကုဋေလောက်ကုန်တယ်။ အဲဒီ နှစ်သောင်းလောက်ရှိတဲ့ စစ်တပ်ကို ရှစ်ကုဋေကုန်ရင်၊ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည် ကာကွယ်ေ၇းအတွက် အဖျင်းဆုံး တစ်သန်းလောက် စစ်ဖြစ်လျှင်ဖြစ်ချင်း လိုတော့တာဘဲ။ ဒီတော့ သန်းပေါင်းဘယ်လောက် ကုန်မလဲဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ဘဲ တွက်ကြည့်ပါတော့ဗျာ။ အဲဒီလို ကုန်တဲ့ငွေမျိုး၊ လူတွေ၊ ကျွန်တော်တို့က နောက်တစ်ခါ စစ်ကြီးမဖြစ်ခင် ကျွန်တော်တို့က အမြန်ဆုံးရအောင် လုပ်ရမယ်။
ဒီအနောအတွင်းမှာလဲဘဲ၊ ဟိုနေရာက မထိတထိစတာ၊ ဒီနေရာက မထိတထိ စတာကိုလဲ ကျွန်တော်တို့ ပြန်ပြီးတော့ လုပ်ရဲရမယ်။ဲဒိလို လုပ်နိုင်အောင်က ကျွန်တော်တို့ လုပ်ရမယ်ဆိုရင်၊ ခင်ဗျားတို့ ပြဲအောင် အလုပ်လုပ်ရမယ်။ အလုပ် မလုပ်ဘဲနဲ့တော့ လွတ်လပ်ရေးရပေမဲ့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ ခင်ဗျားတို့ လွတ်လပ်ရေး အရသာကို ကျပ်ပြည့်တင်းပြည့် ခံစား စံစားရမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဘယ်လို အစိုးရဘဲ တက်တက်၊ ကွန်မြူနစ် အစိုးရဘဲ တက်ကတ်၊ ဆိုရှယ်လစ် အစိုးရဘဲတက်တက်။ ဘာအစိုးရဘဲတက်တက် အဲဒီ အလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့တော့ ခင်ဗျားတို့ မဖြစ်ဘူးဆိုတာကို ကျွန်တော်တစ်ထစ်ချ ရဲရဲကြီးပြောရဲတယ်။
အဲဒီတော့ကာ ခင်ဗျားတို့ဟာ လွတ်လပ်ရေးကို လိုချင်ရင်၊ လွတ်လပ်ရေး ရနိုင်လောက်တဲ့ စည်းကမ်းကိုရှိကြပါ။ လွတ်လပ်ရေးကို လိုချင်လို့ရှိရင် လွတ်လပ်ရေးကို ရနိုင်တဲ့ ညီညွတ်မှုကို ထိန်သမ်းထားပါ။ လွတ်လပ်ရေးကို လိုချင်ရင် လွတ်လပ်ရေးကို ရနိုင်တဲ့ ထူထောင်မှုကို လုပ်ကြပါ။ အဲဒီလို လုပ်ပြီးတဲ့နောက် ရှေ့ ကို လွတ်လပ်ရေး အရသာကို ခံစားစံစားချင်တယ်ဆိုရင်၊ အလုပ်လုပ်ကြဖို့၊ စည်းကမ်း ရှိကြဖို့၊ ယခုကတည်းက ခင်ဗျားတို့ ကိုယ်ကို အကျင့်ဆိုးတွေ၊ အကျင့်ဟောင်းတွေ၊ စောကျင့်တွေကို ပြင်ကြဖို့လိုပြီဆိုတာ ကျွန်တော်ကနေ့ပြောခဲ့ချင်တယ်။